Home > Reading Room > News - Daily newspapers produced by the Government of Burma/Myanmar (archive from June 2003) > "The [Global] New Light of Myanmar", "Kyemon" and "Myanmar Alin" > "Myanmar Alin" > "Myanmar Alin" 2010
Description/subject: ပြည်တွင်းသတင်း။ ။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေအိမ်တွင်းအလှဆင်နှင့် အီလက်ထရွန်နစ် အထူးစျေးရောင်းပွဲတော်ဖွင့်ပွဲ တက်ရောက်ချီးမြှင့်... ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းကို အမျိုးသားရေးအသွင်ဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမှာ တဖြည်းဖြည်းလျော့ကျ လာကြောင်းတွေ့ရ... ရန်ကင်းမြို့နယ် ကလေးဆေးရုံတည်ဆောက်မှု တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ငါးသယံဇာတ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး မတ္တရာ၌ ပညာပေး ဟောပြော ... အထက(၄) ကမာရွတ် အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပမည် ... မြို့သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးဆောင်ရွက် ... ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာမိသားစု အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပမည် ... မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း)သင်တန်း စာမေးပွဲကျင်းပမည် ... Acer ၏ နောက်ဆုံးပေါ် နည်း ပညာများ ရွေလမင်းနဂါးကုမ္ပဏီလီမိတက် ပါဝင်ပြသ ... ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုစွန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး ကျင်းပ... မအူပင် -တွံတေး - လှိုင်သာယာလမ်း ဖောက်လုပ် ကွန်ကရစ်တံတားများ တည်ဆောက်နေ... မိုးစပါးအထွက်နှုန်းမှန်ကန်ရေးအတွက် မိုင်းဆတ်မြို့ ၌ စပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်း ... တနိုင်းမြို ၌ စက်ရေတွင်းများ တူးဖော် ... သစ်တောရေးရာဝန်ကြီး ဦးသိန်းအောင် လွိုင်ကော်သစ်ဆိပ် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ... ကျိုင်းတုံတွင် မိုးစပါးစံကွက် ရိတ်သိမ်း ... ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ ဖျာပုံမြို့ (အထက-၁)ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်း များမြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည် ... မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ တိုက်ကြီး၌ ဝတ်စုံများပေးအပ် ... စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေး သာကြီးတောင်ရေနံမြေကြည့်ရှုစစ်ဆေး ... တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်... တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသများ မိုးဆက်လက်ထစ်ချုန်းနိုင်.. ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးစခန်း၌ ပညာပေးဟောပြော ... ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ ပန်းချီပြပွဲ ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည် ... နိုင်ငံရပ်ခြားပညာသင်ကြားခြင်း ဆိုင်ရာ အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များအကြောင်းဟောပြောမည် ... သွေးလှူရှင်များ ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပမည် ... ကေတုမတီ(တောင်ငူ) မြို့တည်၊ နန်းတည် နှစ် ၅ဝဝ ပြည့်အထိမ်း အမှတ် ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲဖွင့် ... အလက(၁)တာမွ ပဉ္စမ အကြိမ်မြောက် အာစရိယ ပူဇော် ပွဲကျင်းပမည်... နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး။ ။ ဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဆွေအား ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ ..... အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု လျင်မြန်သွက်လက်ရေးဖော်ဆောင်..... ဆောင်းပါး။ ။ ၂ဝ၂၂ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလား အိမ်ရှင် ကာတာနိုင်ငံ ရွေးချယ်ခံရ -မြင့််မောင်စိုး ... မသန်သော်လည်း စွမ်းကြသူများ-ကိုကွေး(ဘူမိဗေဒ)
Description/subject: နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး။ ။ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဒုတိယဥက္ကဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး လာအိုနိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတထံ သဝဏ်လွာပေးပို့ ... နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာ ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ လာအိုနိုင်ငံသမ္မတထံ သဝဏ်လွာ ပေးပို့ ... နိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် လာအိုနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ထံ သဝဏ်လွာပေးပို့ ... ကျားမျိုးစိတ်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး ထိပ်သီးညီလာခံ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီး ဦးသိန်းအောင် တက်ရောက် ... နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉ ဏ်ဝင်း လာအိုနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထံ သဝဏ်လွာပေးပို့ ..... ပြည်တွင်းသတင်း။ ။ (၉ဝ)ပြည့် နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားများ နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားနှင့် လယ်ဝေးမြို န့ ယ်တို့၌ ကျင်းပ... မြိတ်မြို့ ဆေးရုံကြီး စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်မှု တိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်မောင်ဌေးကြည့်ရှု့အားပေး ... ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင် မိုးစပါး စံကွက်ရိတ်သိမ်း ... စီးပွားရေးတကကသိုလ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူဟောင်းများ မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်းနှင့် ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ အမ်းလေဆိပ် အဆောက်အအုံတည်ဆောက် ပြီ:စီးမှုကြည့်ရှုစစ်ဆေး ... ရန်ကုန်တိုင်းမ် ဂျာနယ် ထွက်ရှိ... ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ဖျာပုံ၌ ဖွင့်လှစ် ... အရေးပေါ်သုံး တိုင်းရင်း ဆေးသေတ္တာ ကျိုင်းတုံ၌ ပေးအပ်... ဒို့ကျေးရွာဂျာနယ် ထုတ်ဝေ ... အထက(၃) အင်းစိန်(အောင်ဆန်း)ကျောင်း မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲကျင်းပမည် ... အခွင့်အလမ်းဂျာနယ် (၅)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပ ... ဧရာဝတီမြစ်ကူး အနော်ရထာတံတား(ချောက်) ရေလမ်းကြောင်းအား ပြောင်းလဲသတ်မှတ်... လှိုင်သာယာမြို့နယ် သဘင်အစည်းအရုံးနှင့် ဂီတအစည်းအရုံးဝင်များ တွေ့ဆုံ...(၉ဝ)ပြည့်နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားများ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အခြေခံ ပညာကျောင်းများ၌ ကျင်းပ... နေပြည်တော်- မန္တလေး -နေပြည်တော် မိုင် ၃၉ဝခရီးရှည်အမျိုးသား/အမျိုးသမီးစက်ဘီး ပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံးနေ့ ပွဲစဉ်နှင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပ နေပြည် တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်အေး တက်ရောက်ဆုချီးမြှင့် ... တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ဘောလုံးပြို င်ပွဲ ပထမအဆင်အုပ်စု ပတ်လည် ပြိုင်ပွဲများ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင် ... အထက(၂)သာကေတ မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲကျင်း ပရေး အကြိုညှိနှိုင်းစည်းဝေးမည် ... အောက်ပိုင်းဒေသများ ညအပူချိန်ပိုနေမည်... မိုးစပါးအထွက်နှုန်း မှန်ကန်ရေးမတ္တရာ၌ စံကွက်ရိတ်သိမ်း ... ပါကေးအစားထိုး ကြမ်းခင်းများပြသ... ညောင်ရွေမြို့နယ်တွင် မိုးစပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်း... အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ ကံထူးရှင်များရွေးချယ် ... တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ ..... အယ်ဒီတာ့ အာဘော်။ ။ ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရေး တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ လက်တွဲပူးပေါင်းပါဝင်..... ဆောင်းပါး ။ ။ ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ကူးစက်မှုအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ် (ဒေါက်တာ ခင်ဥမ္မာစံ)
Description/subject: ရွေးကောက်ပွဲသတင်း။ ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်အရ လွတ်တော်များ ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က မှန်မှန်ကန်ကန်ကျင်းပပေးပြီးဖြစ် ယခုအခါ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ပြည်သူ့ထံသို့ ပြန်လည်အပ်နှင်းရေး ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းစဉ် နှစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်ရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိ ..... ပြည်တွင်းသတင်း။ ။ မိုးစပါးအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနေမှုနှင့် ငါးမွေးမြူး​ရေးစခန်းများ တိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ရဲအောင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း လောင်းလုံမြို့နယ် ဒေဝီ စိုက်ပျိုးရေးခြံ၌ သရုပ်ပြ... အင်းတကော် အထက(၁၆)ကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... သက်ကြီးစာပေပညာရှင်များ ကန်တော့ပွဲ အလှူငွေနှင့်ကန်တော့ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းနိုင်... အချိန်ကိုအသုံးချနည်း စာအုပ်သစ် ထုတ်ဝေ... ဘားအံမြို့နယ်၌ ဟိုင်းလတ်ယာဉ်တစ်စီးတိမ်းမှောက်... အထက (၁၄)မန္တလေး ကျောင်းသားဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင် လှိုင် ပူတာအိုနှင့် မချမ်းဘောမြို့နယ် ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုများ ကြည့် ရှုစစ်ဆေး ... ပြည်သူလူထုအခြေ ပြု မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ကျောက်ကြီးမြို့ ၌ အသိပညာပေးဆွေးနွေး... ပုသိမ်-မုံရွာလမ်း တိုးတက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်လှမင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ကျန်စစ်သားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းသစ် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၌ဖွင့်... ပြည်မြန်မာသတင်း ဂျာနယ်ဖြန့်ချီ... လယ်ဝေးမြို့နယ်၌ မိုးစပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်း... ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)ရန်ကုန် (၁၉၇၂ - ဝခုနှစ်)ကျောင်းသားဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲ... ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ သင်ကြားပေးလျက်ရှိ... တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆက် လက်ယှဉ်ပြိုင် ... အရှေ့ပိုင်းဒေသများ နေရာကွက်ကျားမိုးရွာနိုင်...မော်လမြိုင်စက်မှုလက်မှု အထက်တန်းကျောင်း အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများ ဖွင့်မည်... အထမ(၁) အင်းစိန်မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ... မိုးစပါးအထွက်နှုန်းမှန်ကန်ရေး ရမည်းသင်းမြို့ ၌ စံကွက်ရိတ်သိမ်းပွဲကျင်းပ... အူပင်မြို့ အထက(၁)မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... နွေစပါးနှင့် ဆောင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးရေး ထန်းတပင်မြို့ ၌ စီမံကိန်းတာဝန်ပေး ... လှည်းကူးမြို့နယ် မဟူရာသစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွက် စီးပွားရေး (ကျွန်း)စိုက်ခင်း စိုက်ပျိုးထားရှိမှု ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး... အောင်မြေသာစံမြို့နယ်အတွင်း ကတ္တရာထပ်ပိုးလွာ ခင်းနေမှု မန္တလေးမြို့တော်ဝန် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး...(၉၁) ကြိမ်မြောက် သွေးလှူဒါန်း... မြို့သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၌ အလှူငွေများပေးအပ်... မတ်ပဲနှင့်နေကြာသီးညှပ် ကြို့ပင်ကောက်၌ စိုက်ပျိုး... အလိုတော်ပြည့်ဘုရားပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ ... MFF PEP WOMEN CUP 2010 ဖွင့်ပွဲကျင်းပ ... တူဒေးစာအုပ်တိုက်ထုတ် Myanmar Series စာအုပ်များ စျေးနှုန်းလျော့ ...ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ ... နောင်ချို၌ မြို့သာယာလှပရေးဆောင်ရွက်..... နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး။ ။ ဝန်ကြီး သူရဦးအေးမြင့်အား လာအိုသံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ ... အတွင်းရေးမှူး(၁) သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး တရုတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဥက္ကဌ အားလက်ခံတွေ့ဆုံ... မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်/စက်မှုအသင်းချုပ်နှင့် ပြည်ပကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေ့ဆုံ ..... အယ်ဒီတာ့ အာဘော်။ ။ နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်လွတ်လပ်ရေး အမျိုးသားရေးတာဝန်အဖြစ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်..... ဆောင်းပါး ။ ။ ရန်ကုန်မြို့မိုင်(၃၀)ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး အထောက်အကူပြု ဝါးကတုတ်ရေလှောင်တမံ -သတင်းဆောင်းပါးနှင့့်် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း - ခင်မောင်သန်း(စက်မှု)...အမျိုးသားနေ့အဓိဌာန် (အောင်ကြည်ညွန့်- တက္ကသိုလ်)..... ကဗျာ ။ ။ အမျိုးသားနေ့ ဒို့မမေ့ (တက္ကသိုလ် ညိုညိုသန့်)
Description/subject: ပြည်တွင်းသတင်း။ ။ ကချင်ပြည်နယ်အတွက် အစင်း (၂ဝ)မြောက် ပေ ၁ ဝအထက် ကောင်းမှုလုံကြိုးတံတားဖွင့်လှစ် ခရီးသွားပြည်သူများနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်များ လွယ်ကူချောမွေ့စွာသွားလာနိုင် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု လျင်မြန်သွက်လက်လာပြီး ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်... မူလာရှီးဒီ တံတားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဦးခင်မောင်မြင့် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ... အိမ်တိုင်ရာရောက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လှည်းကူးမြို့ ၌ ဆောင်ရွက် ... မိုးစပါး အထွက်နှုန်း မှန်ကန်ရေး တွံတေးမြို့ ၌ စံကွက်ရိတ်သိမ်း စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပြည်)ကျောင်းသား ဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် ချီဖွေငယ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... တူဒေးစာအုပ်တိုက်နှင့် ပြည့်စုံစာအုပ်တိုက် စာအုပ်အရောင်းပွဲတော် ကျင်းပမည်... မြောက်ပိုင်း ဒေသများ ကွက်ကျားမိုးရွာဖွယ်... မသန်စွမ်းသူများလေ့လာရေးခရီး ညောင်တုန်းရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေ စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဦးလွန်းသီ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှာကြား... ရန်ကုန်မြို့ရှိ တက္ကသိုလ်များ ဝန်ကြီးဒေါက်တာချမ်းငြိမ်း ကြည်ရှုစစ်ဆေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ များ ထန်းတပင်မြို့နယ်၌ ဆွေးနွေးဟောပြော... အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းနှင့် သင်တန်း ဆင်းပွဲကျင်းပ ... မိုးစပါးအထွက်နှုန်းမှန်ကန်ရေး ရေးမြို့နယ်၌ စံကွက်ရိတ်သိမ်း စျေးမီးဘေး အန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်... တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်... နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲကျင်းပပြီးစီး... ပြပွဲကာလအ တွင်း တင်ဒါစနစ်၊ စျေးပြိုင်စနစ်တို့ဖြင့် ကျောက်စိမ်းအတွဲပေါင်း စုစုပေါင်း ၇၇ ၄တွဲ ရောင်းချရ ... မွေးမြူရေးနှင့် ဆေးကုသရေးဆရာဝန်များ မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲကျင်းပမည် (၆၃)ကြိမ်မြောက် တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ စာမေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပမည် ... နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက် မျက်ရတနာပြပွဲကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီ သုံးပတ်အစည်းအဝေးကျင်းပ... ထောက်ရှာပင်၊ ကမ်းနီ ရေနံမြေ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေး ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... အထက(၁)လမ်းမတော် ( စိန်ဂျွန်း) မြတ်ဆရာပဇော်ပွဲကျင်းပမည်... လှော်ကားဥယျာဉ် အမျိုးသားနေ့ ဖွင့်ထားမည်... မိုးစပါး အထွက်နှုန်း မှန်ကန်ရေး စံကွက်ရိတ်သိမ်း အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်း ဆင်းပွဲကျင်းပ... ကေတုမတီ မြို့တည်နန်းတည် နှစ်(၅ဝဝ)ပြည့်ပွဲတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်ပေါင်းစုံ ဝတ်စားဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့ မှု ပြိုင်ပွဲကျင်းပ... ဆရာချစ်နိုင် ( စိတ်ပညာ)၏ စာရေး သားနည်းစာအုပ်ထွက်ရှိ... ပညာရေး ငွေပဒေသာပင် ဖြူးမြို့၌ စိုက်ထူ မြေပုံမြို့နယ်၌ ထောက်ပံ ပစ္စည်းများပေးအပ်... ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းအကြောင်း ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၌ ဟောပြော ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက်လွာများ အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်... ၂ဝ၁ဝခုနှစ် အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်းစုံ လူသစ်တန်းခရစ်ကက်ပြိုင်ပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ ... အသက်(၇၅)နှစ်အထက်ဘိုးဘွားများ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း လေ့လာရေးခရီးစဉ်ပို့ဆောင်... ပန်းတောင်းမြို့နယ်ရှိ ကျောင်းများ အာစရိယပဇော်ပွဲကျင်းပမည်... ကြို့ပင်ကောက်၌ မိုးစပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်း... ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ..... နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး။ ။ အာဆီယံ-တရုတ် လူငယ်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ ပြန်လည်ထွက်ခွာ..... အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ ။ နိုင်ငံတကာသို့တိုင် ထိုးဖောက်နိုင်သော မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ..... ဆောင်းပါး။ ။ မျိုးချစ်စ်စိတ်ဓာတ်အရင်းတည် ဒို့မြန်ပြည်( မြင့်မောင်စိုး)..... ကဗျာ။ ။ အမျိုးသားနေ့ ဘယ်မမေ့နိုင်-ဦးအောင်မွန်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
Description/subject: ပြည်တွင်းသတင်း။ ။ နိုင်ငံတော်၏ မည်သည့်နေရာဒေသတွင် နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ ဒေသစွဲ၊ လူမျိုးစွဲ မထားရှိဘဲ စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မိမိတို့ကျရာအခန်းကဏ္ဍ တက်ညီလက်ညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်... စာရင်းစစ်များ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ဖွင့်ပွဲကျင်းပ... အထက(၃) ဗိုလ်တထောင် အာစရယိ ပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် တားဆီး ကာကွယ်ရေးသာကေတမြို့နယ်၌ ရှင်းလင်းဟောပြော... အိုင်အိုဒင်းဆားပါဝင်မှု မြင်းခြံ၌စစ်ဆေး... သစ်သားတံတားတည်ဆောက်... ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ခုနှစ် ဘိန်းစိုက် ရာသီအတွင်း ဘိန်းခင်းစုစုပေါင်း ၇ ၃ ဒသမ ၉၅ဧက ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့... ရွေလီ(၂)နှင့် ဘီးလင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတို့အတွက် သဘောတူညီမှုစာချွန်လွာနှင့် နားလည်မှု စာချွန်လွာ လက်မှတ်ရေးထိုး မုံရွာမြို့ အထက(၁)(ယခင်ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်း)အာစရိယ ပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများ ရွေလမင်းနဂါးကုမ္ပဏီ ပြသရောင်းချမည်... TRUE VALUE အဆင့်မြင့် နည်းပညာအသစ်များပြသမည်... စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများ အသင်းကုန်စည်ပြပွဲကျင်းပမည်... နေပြည်တော်- မန္တလေး-နေပြည်တော် မိုင်(၃၉ဝ) ခရီးရှည် အမျိုးသား အမျိုးသမီး စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်... စီပွားရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများဖွင့်မည်... ငါးသိုင်းချောင်းမြို့(အထက)အာစရယိ ပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... တစ်ချက်တည်းကျင်းဝင်... မြို့သန့် ရှင်းသာယာလှပရေး တာချီလိတ်၌ ဆောင်ရွက်... အထက (သရက်ချောင်း) မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသများ မိုးအနည်းငယ်ရွာဖွယ်ရှိ... ဖားကန့်စည်ပင်သာယာ ကျေးလက်ရေပေးရေး ဆောင်ရွက်... တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဖလား တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပထမအဆင့်အုပ်စု ပတ်လည်ပြိုင်ပွဲများ ယှဉ်ပြိုင်... ... ဆေးပညာဘာသာရပ်များဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးဟောပြောမည်... နဝဒေးတံတား (ပြည်)ရေလမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲသတ်မှတ်... မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဌဖလား ပခုက္ကူဇုန်ပြို င်ပွဲ ဖွင့်... အထက(၄)အလုံ ကျောင်းသား ဟောင်းများအာစရိယပူဇော်ပွဲ မော်လမြိုင် အထက(၁)အာစရိယ ပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... ကုမာရလမ်းသစ် ဒေးဒရဲမြို့နယ်၌ဖွင့်လှစ်...KMD မှ ဆောင်းရာသီ အထူးစျေးရောင်းပွဲ ကျင်းပမည် ... EEE ကုန်စည်ပြပွဲမှာ အပန်းဖြေကာ စျေးဝယ်ပါ... အင်းစိန်စက်မှုသိပ္ပံ အာစရိယပူဇော်ပွဲ... ဒုရဲအုပ်လောင်း အမှတ်စဉ် ၁၂/၈၈ သင်တန်းသားများတွေ့ဆုံပွဲ... ရွေပြည်သာမြို့နယ် စုပေါင်းအလှူ...အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန စျေးရောင်းပွဲတော် ညောင်တုန်းမြို့နယ်၌ ကျင်းပ... နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ဒီလိုမာပညာသင်ဆုရရွေးချယ် ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည်... ဗီဒီယိုဥပဒေဆိုင်ရာ ဟောပြောဆွေးနွေး... မီးသတ်ဦးစီးဌာန ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဖွင့်... နှစ်လယ်မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဆက်လက် ကျင်းပ... ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ရတနာကုန်သည်များ ကျောက်စိမ်းအတွဲများကို တင်ဒါစနစ်၊ စျေးပြိုင်စနစ်တို့ ဖြင့် အပြိုင်အဆိုင်ဝယ်ယူ... သာကေတအထက(၃) အာစရိယပူဇော်ပွဲ အကြိုညှိနှိုင်းစည်းဝေးမည်..... နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး။ ။ ဗီယင်ကျန်းမြို့တော်နှစ်(၄၅ဝ)ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပ နယ်စပ်/စည်ပင်ဝန်ကြီးဦးသိန်းညွန့် တက်ရောက်ခဲ့... မြန်မာပရိသတ်အချစ်တော် တောင်ကိုးရီ:ယားအနုပညာရှင် ဂျူမုံနှင့်မင်းသမီး လီဟာနားတို့ ရန်ကုန်ရောက်ရှိ -သတင်းမှတ်စု - မောင်မောင်မြင့်ဆွေ “ ဓာတ်ပုံ - အောင်သန်း (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်)...ထူးခြားသည့်ညအပူချိန်များ..... အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ ။ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးဝင်ငွေတိုးလက်ဖက်ပင်များတိုးချဲ့ စိုက်ပျိုး(အယ်ဒီတာ့အာဘော်)
Description/subject: မည်သည့်အစိုးရ တာဝန်ယူသည်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေး၊ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ ဝိုင်းဝန်းလက်တွဲဆောင်ရွက် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်အခြေခံသည့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုစွမ်းအားဖြင့် အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်မြင့်မားရေးကို သားစဉ်မြေးဆက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်... ကျေးလက်စာကြည့်တိုက်ဖောင်ဒေးရှင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း (အယ်ဒီတာ့အာဘော်)... ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ ရွေပြားအလှူတော်ရေစက်ချ မင်္ဂလာအခမ်းအနားတိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးထွန်းသန်းတက်ရောက်... ကျောက်ကြီး၌မီးဘေးလုံခြုံရေး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး... ဂျီတီ။အိုင်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများအာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... မိုးစပါးအထွက်နှုန်း မှန်ကန်ရေးဥက္ကံ၌ စံကွက်ရိတ်သိမ်း... ပုံပြောပြိုင်ပွဲဆုချီးမြှင့်...(၉ဝ)ပြည့်နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ဦးတည်ချက်များ... အာဆီယံ-တရုတ် လူငယ်ချစ်ကြည်ရေးစခန်းချပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ...အထက်ပိုင်းဒေသများ ညအပူချိန်လျော့နည်း ...နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဆက်လက်ကျင်းပ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်ကြည့်ရှုအားပေး... အလွတ်တမ်းဖူဆယ်ဘော်လုံးပြိုင်ပွဲ အုပ်စုပွဲစဉ်ဇယားမဲနှိုက်ရေးဆွဲ...သံအမတ်ကြီး ဦးပေါ်လွင်စိန်အားနယူးဇီလန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်... နိုင်ငံတော်အစိုးရဌာနပိုင် မော်တော်ယာဉ်မသုံး စွဲရနေ့... ပီတိကိုမျှဝေပါတယ် (ဆောင်းပါး-ဒေါက်တာဝင်းနိုင်)... တောင်ကြီးကောလိပ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ဒွါဒသမအကြိမ် အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ်ထွက်ရှိ...ပြည်နယ်နင့်တိုင်းဒေသကြီးအခြေခံပညာရေးအဆင့် အသက်(၁၆)နှစ်နှင့်အောက် ဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ... လယ်ဝေးမြို့နယ်တွင် မိုးစပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်း... နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာနစီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်းများဆင်းပွဲကျင်းပ... အခြေခံပညာကျောင်းများမှ ဆရာ ဆရာမများမီးသတ်ဦးစီးဌာနသို့ လာရောက်လေ့လာ... ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးပခုက္ကူ၌ စက်ရေတွင်းလှူဒါန်း... ပန်းတဉ်းတန်းအသင်းစုပေါင်း အလှူ...နတ်တလင်း၌ မိုးစပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်း... နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ကြိတ်ကြိတ်တိုးစည်ကားမြန်မာကျောက်စိမ်းကိုပြည်ပရတနာကုန်သည်များအကြိုက်တွေ့
Description/subject: အေးချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာ မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၏ အရေးကိစ္စဖြစ် နိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေးတွင် နိုင်ငံသားများ၏ မြင့်မားသည့်ခံယူချက်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ် အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာ အမြင်များနှင့်ပြည့်စုံသည့် နိုင်ငံသားကောင်းသမီးမွန်များဖြစ်ရေး ကြိုးပမ်း... ဆီးချို သွေးချိုရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းကြပါ -ဆောင်းပါး-ပါမောက္ခ ဒေါက်တာတင့်ဆွေလတ် (စီမံချက်မန်နေဂျာ)... စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော မုဒုံမြို့-သတင်းခရီးသည်- မျိုးမင်းသိန်း(မရမ်းကုန်း) ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း-သတင်းထောက် လေးနွယ်(မင်္ဂလာဒုံ)...တောင်ပေါ်လက်ဖက်စိုက်ခင်းများဖြင့်စိမ်းလန်းစည်ပင်နေသော ချင်းပြည်နယ်-သတင်းခရီးသည် - မြင့်မောင်စိုး-ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း - တင်စိုး (မြန်မာ့အလင်း)... သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်... ဆူးလေအမှတ်(၅)တံတားနှင့်ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများဝန်ကြီးဦးသိန်ဆွေကြည့်ရှုစစ်ဆေး... မြန်မာ-ဗီယက်နမ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ... မိုးစပါးအထွက်နှုန်း မှန်ကန်ရေးကော့မှူးမြို့နယ်၌ စံကွက်ရိတ်သိမ်း... ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... ဂီရိ (ွှုျွှု)မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ပြည်သူများအတွက်အလှူငွေနှင့်ပစ္စည်းများပေးအပ်လှူဒါန်း... နိုင်ငံတော်ဩဝါဒါစရိယ ဆရာတော်အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္ဓဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒနပ္တ ညာဇောတ ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မ...နိုင်ငံတော်ဩဝါဒါစရိယပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း)၊ သဲကုန်းမြို့နယ်၊ကိုယ်ကြီးမြှုပ်ကျေးရွာ ကိုယ်ကြီးမြှုပ်ကျောင်း ပဓာနနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာဇောတ(အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ)၏ထေရုပတ္တိအကျဉ်း... ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဒေါက်တာကျော်မြင့်အားဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံမှ ဧည့်သည်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ...ကိုယ်ကာယကြံ့ ခိုင်မှု (အေရိုးဗစ်)ပြိုင်ပွဲမော်လမြိုင်၌ ကျင်းပ၊ ဆုများချီးမြှင့်... ဒလ အထက(၁) မြတ်ဆရာပူဇော်မည်...မန္တလေးမြို့ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်ခွဲများဝန်ကြီးဦးလှထွန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး...ပြည်မြန်မာသတင်းဂျာနယ် ဖြန့်ချိ... (၂၂)ကြိမ်မြောက် မျက်စိဆရာဝန်များညီလာခံ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ... ကျုံပျော်၌ သုံးမြွာပူးကလေးများ အတွက် အလှူငွေထောက်ပံ့... မုဒုံမြို့နယ်၌ မိုးစပါးစံကွက်များ ရိတ်သိမ်း... အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲဒီဇင်ဘာ၁ရက်တွင် ကျင်းပမည်... ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်ရွေးမည်...၂ဝ၁ဝခုနှစ် နှစ်လယ်မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပသတ္တုတွင်းဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့် ကျောက်စိမ်းဥယျာဉ်အတွင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... တောင်ဥက္ကလာပ အထက(၁)အာစရိယပူဇော်ပွဲ... အိမ်တိုင်ရာရောက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၌ဆောင်ရွက်... ၂ဝ၁ဝခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ(၁) ရက် HIV ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့... အထက်ပိုင်းဒေသများ ညအပူချိန်လျော့နည်းနိုင်... ၁၉၈ ၃ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများ တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပမည်...ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှု(အေရိုးဗစ်)ပြိုင်ပွဲဆုချီးမြှင့်ပွဲ ကျင်းပ... ပြွန်တန်ဆာမြို့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်နေမှု တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးထွဋ် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... အခြေခံမီးသတ်သင်တန်းဆင်းပွဲကျိုက်ထိုမြို့နယ် ၌ကျင်းပ... ဟားခါးမြို့ ၌ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေးဆောင်ရွက်... နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး(တမူး)စခန်း နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး ညှိနှိုင်းစည်းဝေး... စာကြည့်တိုက် အဆောက်အအုံသစ်လားရှိုးမြို့နယ် ပန်ဆပ်ကျေးရွာ၌ ဖွင့်လှစ်... ထူးခြားသည့်ညအပူချိန်... ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်း
Description/subject: ပြည်တွင်းသတင်း။ ။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နည်းပညာနှင့် သုသေသနအဆောက်အအုံတည်ဆောက်မှု ဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဆွေ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး...ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းဗန်းမော်မြို့၌ ဆောင်ရွက်...ထူးကြီး အထက ကျောင်းသားဟောင်းများ ဒုတိယအကြိမ် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည် ... ဗဟန်းမြို့နယ် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ပညာသင်ထောက်ပံ့ ငွေချီးမြှင့်... ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်လှမင်း ကေတုမတီ (တောင်ငူမြို့) မြို့တည် နန်းတည် နှစ်(၅ဝဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများ တက်ရောက်အားပေး...ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ...တောင်ပိုင်းဒေသများမိုး အနည်းငယ်ရွာဖွယ်ရှိ... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် အခြေခံပညာ ကျောင်းပေါင်းစုံ လူသစ်တန်းခရစ်ကတ်ပြုင်ပွဲ ကျင်းပ... မှော်ဘီမြို့နယ် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်ထွန်းသန်းကြည့်ရှုစစ်ဆေး... တောင်ငူမြို့အထက (၆) ကျောင်းသားဟောင်း များ အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... ပြင်ဉီးလွင် -မိုးကုတ်ကားလမ်းသစ် ကတ္တရာလမ်းအဆင့်တိုး မြှင့် ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး...စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည်... ကျောင်းသား ကျောင်းသူများကို စာပေတတ်မြောက်ရေး သင်ကြားပေးမှုတစ်ခုတည်းဖြင့်မလုံလောက် ပတ်ဝန်းကျင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လက်တွေ့ကျိုးရှိရှိ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှ သာ ပညာရေးကဏ၏ ဦးတည်ချက် ပြည့်စုံအောင်မြင်မည်...ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် အာစရိ ယပူဇော်ပွဲ ... ပညာရပ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်... မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တက္ကသလိုလ်၊ကောလိပ်နှင့် အခြေခံပညာကျောင်းများ ဝန်ကြီးဒေါက်တာချမ်းငြိမ် ကြည်ရှုစစ်ဆေး ...သဘောတူညီမှုစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး... နှစ်လယ်မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ ရတနာကုန်သည်များ ကျောက်စိမ်းအတွဲများကို အပြိုင်အဆိုင်ဝယ်ယူ... မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်း သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... တိုင်းမှူးဒိုင်းသေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇေယျာအော​င်တက်ရောက်... မြို့မကျောင်းသား ကျောင်းသူဟောင်းအသင်း အာစရယိ ပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည် ဖလားဝါးနယူးစ်ဂျာနယ် ထွက်ရှိ...မိုးစပါးအထွက်နှုန်းမှန်ကန်စေရေး ဥပ္ပုံကျေးရွာ၌ စံကွက်ရိတ်သိမ်းလက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များ မြတ်ဆရာပူဇော်မည်... ကျိုက္ကော်-သိမ်ဆိပ်တိုက်နယ် မူလတန်းကျောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး တာချီလိတ်မြို့၌ဟောပြော ဖျာပုံမြို့ အထက(၃) (ယခင် ကရင်ကျောင်း)အာစရယိ ပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... သေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်သန်းထွန်းဦး တက်ရောက်... မိုးစပါးအထွက်မှန်ကန်စေရေး စံကွက်ရိတ်သိမ်း... တပ်ကုန်းမြို့နယ် စာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့မြတ်ဘုန်းစာကြည့်တိုက်သို့ စာအုပ်များလှူဒါန်း... ကြက်၊ ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါစူးစမ်းလေ့လာမှု မကွေးမြို့၌ ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ... ပုဂံ-ညောင်ဦး မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေရေး ငွေလှူဒါန်း(၇၅)ကြိမ်မြောက် သွေးလှူဒါန်း... ရေပိုက်ဝယ်ယူ စဆောင်း ... ပဲခူးဒီဂရီကောလိပ် အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... ကေတုမတီ(တောင်ငူ) မြို့တည် နန်းတည် နှစ်(၅ဝဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲကျင်းပ... တိုင်းရင်းဆေးသေတ္တာများ ဟိုပင်၌ပေးအပ်... သွေးလွန်တုပ်ကွေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးခြင်ဆေးဖျန်း..... နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး။ ။ နိုင်ငံတော်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန် တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ...ဝန်ကြီးသူရဦးမြင့်ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ (၁၆)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြို င်ပွဲနှင့်အာရှအိုလံပစ် ကောင်စီအထွေထွညီလာခံ သို့တက်ရောက်ခဲ့...တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ကွန်မြူနစ်ပါတီကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး မစ္စတာပိုင်အန်းဖေ ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိ...နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး(၁) သီဟသူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကွမ်ရှီးကျွမ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ ပါတီကော်မတီ အမြဲတမ်းကော်မတီဝင် ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး မစ္စတာချန်ဝူး ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ....ယူနန်ပြည်နယ် ကွန်မြူနစ်ပါတီကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ခေါင်းဆောင်သော အဖွဲ့ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိ..... အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် ဝိုင်းဝန်းကာကွယ် ..... ဆောင်းပါး။ ။ အထူးစီမံကိန်းဝင် ဧရာဝတီ မြစ်ကူးတံတားရတနာသိင်္ဃ- သတင်းဆောင်းပါး - ကတို ငလ် ငှို ( မိတ္ဃီလာ) ဓာတ်ပုံ- ဆောက်လုပ်ရေး...ပြည်ခရိုင် ပဲခူးရိုးမစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ကျွန်းနှင့်အခြားစိုင်ခင်းမြင်ကွင်းများ (သတင်းဆောင်းပါးနှင့် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ခင်မောင်သန်း(စက်မှု)
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်(သာမညဖလ အခါတော်နေ့)နိုင်ငံတဝန်းကုသိုလ်ပုညြပုကြသူများဖြင့်စည်ကား ...အချိုးအကွေ့များဖြင့်ထူးခြားစွာအောင်မြင်ခဲ့သည့် နေတိုးထိပ်သီးအစည်းအဝေး(ဆောင်းပါး-တိုး)..STI rS Seminar on Marketing Managementဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်...မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်...မြိတ်မြို့​ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်မောင်ဌေး ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... စမ်းချောင်း အထက(၄)ကျောင်းသားဟောင်းများ အာစရယိပူဇော်ပွဲကျင်းပ... အောက်တိုဘာလအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးအမှု(၁၆၇)မှု တရားခံ(၂၉၃)ဦး ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့... မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အခြေခပံ ညာကျောင်းပေါင်းစုံ ဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ... စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် အာစရိယပူဇော်မည်... အောင်ထက်မြတ်ကုမ္ပဏီမှနှစ်သစ်အကြို ရန်ကုန်တာယာများရောင်းချ... ယနေ့ခေတ်မော်တော်ယာဉ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏လမ်းများ ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်စာအုပ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ... သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန အမှုထမ်းအဆင့် အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဖွင့်... ပုသိမ်-မုံရွာလမ်းအပိုင်း(၁) ကတ္တ ရာလမ်းအဆင့် တိုးမြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောက်လုပ်ရေးဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမြင့်သိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... အိမ်တိုင်ရာရောက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျောက်တန်းမြို့နယ်တွင်ဆောင်ရွက်... နေပြည်တော်စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်ထွက်ရှိ... အင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာဘာသာရပ်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်လျက်ရှိ... နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဆက်လက် ကျင်းပ တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ကျောက်စိမ်းအတွဲပေါင်း ၁၄၉၅တွဲ စတင်ရောင်းချရ... ခုနစ်စပေကျော်ရှိငမိုးရိပ်မိကျာင်းဖမ်းဆီးရမိ... မြတ်တဲ့အလှူပွဲ-(ကဗျာ-ရာဇာညွန့်)... မြောက်ပိုင်းစွန်းဒေသများ မိုးရွာနိုင်... အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့်လားရှိုးမြို့၌ ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံ... အချစ်လား လာထားနှင့် Sky Line အပြိုင်ပြသ... စာကြည့်တိုက် ဖွင့်ပွဲနှင့်ငွေပဒေသာပင်စိုက်ထူပွဲ ဖျာပုံ၌ကျင်းပ... မင်္ဂလာတောင်ညွန့် အထက(၇)ကျောင်းသားဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်မည်... ကတ္တရာလမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင် တိုးချဲ့နေသော ကွတ်ခိုင်-တာမိုးညဲ-တာပါး-တာရွေထန်လမ်း ( သတင်းဆောင်းပါး - ခရမ်း စိုးမြင့် ၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း - ကျော်မိုးလွင်)... ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ ... မိုးရွာသွန်းမှု...
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစခန်းမှူးရုံး မိသားစုဘုံက ထိန် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ... မြတ်သောကာလ တန်ဆောင်မုန်းအခါသမယ ဒါနကုသိုလ် ပွားများလွမ်းခြုံ (အယ်ဒီတာ့ အာဘော်)... တောင်ဇလပ်မြိုင်စခန်းရှူးတန်းဖြင့်သာယာလှပနေသော ဟားခါးမြို့ -သတင်းခရီးသည် မြင့်မောင်စိုး-ဓါတ်ပုံ-တင်စိုး(မြန်မာ့အလင်း)... တိုက်ကြီးမြို့နယ် ဆင်ခြံကျေးရွာအုပ်စုတွင် မိုးစပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်း... ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေအား ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး တွေ့ဆုံ... နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အသင်းပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲကျင်းပမည်... ၂ဝ၁၁ခုနှစ် နေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ဖြန့်ချိ... ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အထွက်တိုးရေးနည်းလမ်းပေါင်းစုံ ဖြင့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်... ဘားအံမြို့နယ်အသင်း သက်ကြီးပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... လှူကထိန်သင်္ကန်းနှင့် မဂ်လမ်းကိုတဲ့ ဆုပန်ရွယ်-ရှိန်အောင်ဗိုလ်... သာမညဖလ အခါတော်နေ့ဦးအောင်မွန် (မဟာဝိဇ္ဇာ)... ဘဝရှေ့ဆောင် စာကြည့်တိုက် အဆောက်အအုံသစ်ဖွင့်... မိုးစပါးအထွက်နှုန်းမှန်ကန်ရေးထန်းတပင်မြို့၌ စံကွက်ရိတ်သိမ်း... ၂ဝ၁ဝခုနှစ် ဆဌမအကြိမ်မြောက်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဖလား တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ... ငါးသယံဇာတ မပြုန်းတီးရေး ဓနုဖြူ၌ ဆွေးနွေး... ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းကျောက်ချောခင်း... ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဟောင်းများ တွေ့ဆုံပွဲ အထက(၄) ကြည့်မြင်တိုင်... ကျောင်းသားဟောင်းများအာစရိယပူဇော်မည်... ရှေးဟောင်းသမိုင်းအထောက်အထားများ သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပ... ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ဦးခင်အောင်မြင့် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား... ၂ဝ၁ဝခုနှစ် ဆဌမအကြိမ်မြောက် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဖလား တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ စတင်ကျင်းပ မြောက်ပိုင်းဒေသများ မိုးရွာနိုင်... မန္တလေးမြို့ အိမ်တော်ရာဘုရားဝင်းအတွင်း၌ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွား အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် စစ်ဆေးဖော်ထုတ်လျက်ရှိ... နေပြည်တော်ပထမဆုံး အကြိမ် နေပြည်တော်-မန္တလေး-နေပြည်တော် မိုင် ၃၉ဝ ခရီးရှည် အမျိုးသား အမျိုးသမီး စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲကျင်းပမည်... နှစ်လယ်မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ စျေးပြိုင်စနစ်၊ တင်ဒါစနစ်တို့ဖြင့်ကျောက်မျက်အတွဲပေါင်း (၃၁)တွဲ ရောင်းချရ... အထက(၂) ပုဇွန်တောင် ဆဌမအကြိမ် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲကျင်းပမည် ဟင်္သာတဂျီတီအိုင်အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... အရေးပေါ်သုံး တိုင်းရင်းဆေးသေတ္တာများဖြန့်ဝေ... သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့်ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ ကျင်းပမည်... ဓနုဖြူ-ကျုတံနီး လမ်းပိုင်းရှိ တံတားလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုများ တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်တင်မောင်ဝင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ဧရာဝတတီတိုင်း ဒေသကြီးတရားရုံး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ... အရေးပေါ်သုံးတိုင်းရင်ဆေးသေတ္တာများညောင်ရွှေ၌ ဖြန်ဝေ... စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် အလှမွေးငါးပြပွဲပြိုင်ပွဲ - သတင်းဆောင်းပါး- မောင်မောင်မြင့်ဆွေ-ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း-ကျော်မြင့်သန်း(လမ်းမတော်)... မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ စာဆိုတော်နေ့အထိမ်း အမှတ်သက်ကြီးစာပေ ပညာရှင်များကန်တော့ပွဲ ကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပ... အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာတန်းခွဲများ ဖွင့်မည်... မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု သတင်းမှတ်စု - (ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲဆင်နွှဲ တန်ဆောင်တိုင်မီးပုံးပျံပွဲ သတင်းမြင်ကွင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း - ဖိုးသော်ဇင်)... အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)ဖွင့်ပွဲရေဦးမြို့နယ် ရွာဗုကြီးကျေးရွာ၌ ကျင်းပ... ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ... မိုးရွာသွန်းမှု...
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ၂ဝ၁၅ခုနှစ်တွင် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းတည်ထောင်နိုင်ရေး အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက် မိမိတို့ချမှတ်ထားသည့် ဘုံရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်မှုရရှိစေရေး အစိုးရပိုင်းသာမက ပုဂ္ဂလိကအပိုင်းကပါ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အားပေးကူညီ... (၄)ကြိမ်မြောက် ဧရာဝတီ-ကျောက်ဖရား-မဲခေါင် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်ဆွေးနွေး... နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ဝင် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာများ(အယ်ဒီတာ့အာဘော်)... ကေတုမတီ(တောင်ငူ) မြို့တည်၊ နန်းတည် နှစ်(၅ဝဝ)ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည်... ဒါးပိန် အထက အဋမအကြိမ်အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး စာကြည့်တိုက်သာကေတမြို့နယ်၌ ဖွင့်လှစ်... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပဦးသိန်းစိန်အားလာအိုနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ... နှစ်လည်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဆက်လက်ကျင်းပ... သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့် လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေး... ACMECS BUSINESS FORUM သို့ မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေး... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် လာအိုနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ... အောက်ပိုင်းဒေသများ ညအပူချိန်အနည်းငယ်တိုးနိုင်... နယူးမန္တလာထွန်း ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး အလှူဒါနပြုမည်... စိန်ဂေဟာဆိုင်ခွဲများတွင် ပြုလုပ်မည့်အရောင်းပွဲအစီအစဉ်... ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွာပြန်လည်ပေးအပ်... ချောက်စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ ကျောင်းသားဟောင်းများ စတုတ္ဃအကြိမ် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... ကြိုတင်ဆန္ဒမဲနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအစဉ်အလာ (ဆောင်းပါး-ဥပဒေလေ့လာသူတစ်ဦး)... ခေါင်းဆောင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအကြား ဆွေးနွေးပွဲ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား... နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းနှင့် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး ဦးစိုးသာ သက်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးနှင့် တွေ့ဆုံပွဲများသို့ တက်ရောက်... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်နှင့် ACMECS (အက်မက်စ်) အဖွဲဝ့ င်နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များ ကမ္ဘော ဒီးယားနိုင်ငံဘုရင်အား ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံ... (၁၆)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ ဆက်လက်ဆင်နွဲ (ဆောင်းပါး-အာကာဟိန်း) ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလောကကို အာရှသားများဆက်လက်ဦးဆောင်နေဦးမည်(မြင့်မောင်စိုး)... ဝန်ကြီး ဦးဌေးဦးအား လာအိုနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ... ပဲမျိုးစုံနှင့်နှမ်းကုန်သည်များအသင်းဓနုဖြူမြို့နယ်၌ ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ ကျင်းပ... MES Quality Control Laboratory အင်ဂျင်နီ ယာအသင်း ၌ ဖွင့်လှစ်... ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ မြို့တော်ဝန် ဦးဖုန်းဇော်ဟန်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ကျောက်ဆည်၌ သဘာဝကွင်းများအတွင်းသို့ ငါးရှဉ့်မျိုးစိုက်ထည့်... ကမ္ဘာ့ ဆရာများနေ့ အခမ်းအနား ရေးမြို့၌ ကျင်းပ... သံတမန်ရေးရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းသားများ စုပေါင်းလှူ ဒါန်းပွဲ ကျင်းပမည်... မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားဖြန့်ချိပြသခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ မြစ်ကြီးနား၌ဟောပြော... မဂ္ဂဇင်းတွင်ရေးသားသူများအား အင်းစိန်၌ ဂုဏ်ပြု... ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း အသိပညာပေး ကတ္တရာလမ်းသစ် မအူပင်မြို့နယ်၌ ဖွင့်လှစ် လေးတောင်နယ်အသင်းစုပေါင်းအလှူ နှင့်သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲ... စိန်ဂျွန်းအမျိုးသားကျောင်း(၁၄)ကြိမ်မြောက် အာစရိယ ပူဇော်ပွဲကျင်းပ... မြို့သာယာလှပရေးလုပ်ငန်းများဗန်းမော်၌ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး.. မြို့သာယာလှပရေးမိုးညှင်း၌ဆောင်ရွက်... ( ၅)ကြိမ်မြောက် သွေးလှူ... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ Kingdom Holding Company ဥက္ကဌဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ...
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ စီအယ်လ်အမ်ဗွီနှင့် အက်မက်စ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်အား ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်... မျက်စိရောဂါလျော့နည်းကျဆင်းရေးဝိုင်းဝန်းပါဝင်(အယ်ဒီတာ့ အာဘော်)... အစဉ်အလာဆင်နွှဲ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ - သတင်းခရီးသည်-မောင်မောင်မြင့်ဆွေ၊ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း-တင်စိုး(မြန်မာ့အလင်း)... (ကြည်း ၊ ရေ၊ လေ) ပြေး၊ ခုန်၊ပစ်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့့််ပွဲအခမ်းအနား တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်း တက်ရောက်... ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့ အထိမ်းအမှတ်စကားဝိုင်းနှင့် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပရေး ညှိနှိုင်းစည်းဝေး... ရေးမြို့ ၌ ကျောက်ပုစွန်များ ပင်လယ်ပြင်အတွင်း ပြန်လွှတ်... ရန်ကုန်ပညာရေးတကကသိုလ် (၁၆)ကြိမ်မြောက် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်အား ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်... ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနှင့် ကမ္ဘာ့ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့ အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ တီဘီနှင့်ငှက်ဖျားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ် ရေးထိုးပွဲကျင်းပ... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်သိန်းစိန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ဆမ်ဒက်ဟွန်ဆန် နှင့်ဇနီးတို့ကတည်ခင်း ဧည့်ခံသောဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်အား ဖနောင်ပင်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးနှင့် စစ်သံရုံးတို့မှ ဝန်ထမ်းမိသားစုများက ဂါရဝပြုနှုတ်ဆက်... ဝန်ကြီး ဦးလွန်းသီအားကိုးရီးယားသမတ္မ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး တွေ့ဆုံ... ၂ဝ၁ဝခုနှစ် နှစ်လယ် မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ... နှစ်လယ် မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီနာယက သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့် ပြပွဲသို့ လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေး... အောက်ပိုင်းဒေသများ မိုးအနည်းငယ်ရွာနိုင်... တာဝန်သိပြည်သူတစ်ဦး၏ သတင်းပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ချိန်ကိုက်မိုင်းထောင်ထားရှိမှုအား တာဝန်ရှိသူများက အချိန်မီဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ သေကျေထိခိုက်ကြရမည့်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ၊ အဖျက်အမှောင့်သမားများနှင့် နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်လိုသူများက အကြမ်းဖက် အဖျက်လုပ်ရပ်များ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ ပြည်သူများအနေဖြင့် မသင်္ကာဖွယ်တွေ့ရှိပါက တာဝန်ရှိသူများထံ အချိန်မီသတင်းပေးပို့ ကြရန် သက်ဆိုင်ရာက သတိပေးနှိုးဆော်ထား ... KNU အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖျက်သမားများ ထောင်ထားသည့် မိုင်းနင်းမိ၍ ဒေသခံပြည်သူနှစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ... ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသလ်၁၉၇၂-၁၉၇ ခုနှစ် ကျောင်းသားဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဇော် ရတနာပုံမြို့သစ်၌ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... မိုးစပါးအထွက်နှုန်းမှန်ကန်ရေးပေါင်မြို့နယ်၌ စံကွက်ရိတ်သိမ်း... အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်... စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ လုပ်ငန်းရှင်များကုန်စည်ပြပွဲ၊ အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် မော်တော်ယာဉ်ပြပွဲ ကျင်းပမည်... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် (၄)ကြိမ်မြောက် ဧရာဝတီ - ကျောက်ဖယား - မဲခေါင် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာ(အက်မက်စ်) ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် (၅)ကြိမ်မြောက် စီအယ်လ်အမ်ဗွီ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ရန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနောင်ပင်မြို့သို့ရောက်ရှိ... ကျောက်ဖြူမြို့ လေဘေးသင့်ဒေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုးထွဋ်စစ်တောင်းတံတား (နတ်သံကွင်း)စီမံကိန်းစစ်ဆေး... ရေနံချောင်း ဒေသကောလိပ် အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... ရပ်ကွက်စာကြည့်တိုက်အဆောက်အအုံသစ်အင်းစိန်၌ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ... သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၌ ကျောက်ပုစွန်များ ပြန်လည်လွတ်ပေး... ဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပမည်... မြန်အောင်မြို့ ၌ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားနေအိမ်ငါးလုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့... မိုးစပါးအထွက်မှန်ကန်ရေ​ေလှည်းကူးမြို့နယ်၌ စံကွက်ရိတ်သိမ်း... တောင်ငူ၌ စာဆိုတော်နေ့အကြို စာပေဟောပြော... ကနောင်အသင်း(ရန်ကုန်)သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲကျင်းပမည်... မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်မဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၃၇) ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ... စာဖတ်ခြင်းနှင့် ကြီးမြတ်သောလူမျိုး(စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများစုစည်းတင်ဆက်မှု) စာအုပ်ထုတ်ဝေ... ဘီးလင်းမြို့နယ်အသင်း(ရန်ကုန်)စုပေါင်းလှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပမည်... မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကူးပြောင်းရေးအတွက် နိုဝင်ဘာ ၇ရက်က ကျင်းပခဲ့သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်အနာဂတ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုများ ရရှိပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်း
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး(၁) သီဟသူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦး ၂ဝ၁ဝခုနှစ် နှစ်လယ် မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်အားပေးချီးမြှင့်... စက်မှုကုန်ကြမ်းသီးနှံရော်ဘာကို တိုးချဲ့စိုက်ပျိုး... လေဘေးကယ်ဆယ်ရေး အလှူငွေပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်း တက်ရောက်... နေပြည်တော်ရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများ ဝန်ကြီးဒေါက်တာချမ်းငြိမ်း လှည်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... အမှတ်(၁) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အထူးစျေးရောင်းပွဲမှော်ဘီ ၌ကျင်းပ... အောက်ပိုင်းဒေသများ၌ ညအပူချိန်အနည်းငယ်တိုးလာနိုင်... တိုင်းမှူးတံခွန်စိုက်ဒိုင်း သေနပ်ပစ် ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလွင် တက်ရောက်... ဓာတ်အားကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း ၄၅၄သန်းနှင့် ၁၅၂သန်း ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည့် အထက်ပေါင်းလောင်းနှင့် နန်ချိုရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိ... TV Guide ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ... သိပ္ပံစိုးလှ၏ တစ်နှစ် ၃၆၅ရက် ကျန်းမာနည်းစာအုပ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ... စာရင်းကိုင်နှင့် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ မွမ်းမံသင်တန်းများဖွင့်ပွဲ ဝန်ကြီးဦးခင်မောင်မြင့် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား... ကွန်ပျူတာစျေးရောင်းပွဲကျင်းပမည် မြန်မာ့ လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး သင်တန်းဖွင့်... မွေး မြူရေးနှင့် ဆေးကသု ရေးဆရာဝန်များမြတဆ် ရာပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ်ထွက်ရှိ... အက်မက်စ်၊ စီအယ်လ်အမ်ဗွီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ - တက္ကသိုလ်ဟန်စိုးဦး... ဂျပန်နိုင်ငံ၌ကျင်းပသည့်(၁၈)ကြိမ်မြောက် အေပက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ အာရှပစိဖိတ်ဒေသ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထူးခြားစွာဖော်ဆောင်နိုင်- ရေးသားသူ-တိုး... အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် သို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... ဖော်ပြချက်အား ပယ်ဖျက်ခြင်း... ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော PGa 21 Ca (Water Treatment Flocculant) ရေကြည်ဆေးမှုန့်အကြောင်း စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ... မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာကြော်ငြာများ အောက်ပါလိပ်စာများ၌ ထည့်သွင်းနိုင်... SHINe သွားတိုက်ဆေးများ ရောင်းချလျက်ရှိ... ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း အားပျော့ ပျက်ပြယ်... လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦး ချင်းစီ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေများကို စာမျက်နှာ နှင့် ၉ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နှစ်လယ်မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ပြပွဲအကြိုခင်းကျင်းပြသထားမှု ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရတနာကုန်သည်များ တည်းခိုနေထိုင်ရေး၊ စားသောက်ရေးနှင့် သွားလာရေး အဆင်ပြေချောမွေ့မှုရှိရေးအတွက် လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန် လမ်းညွန်မှာကြား... မြန်မာအားကစားအသင်း ငွေတံဆိပ်တစ်ခု ထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိ... ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိ...မြန်မာအသင်းနှင့်ဒါလီယံကလပ်အသင်းတို့ခြေစမ်းကြမည်...(သုံးသပ်ရေးသားသူ-စိုးမိုး(IBC)၊ဓါတ်ပုံ-MFF)... ပြည်သူများ စိတ်ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွင်စွာ အပန်းဖြေအနားယူနိုင်ရန် ဘက္ကရီအီးဒ်နေ့တွင် လှော်ကားဥယျာဉ် ဖွင့်လှစ်ထားမည်...မြန်မာနိုင်ငံ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်...ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကန့်ကွက်လိုပါက ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သက်ဆိုင်ရာပါတီအသီးသီးသို့ အကြောင်းကြားစာများပေးပို့... တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ...ကချင်ပြည်နယ်၌အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနေသောသီ:နှံစိုက်ခင်းများ -သတင်းခရီးသည် - သတင်းထောက်ထွန်းဇော် (စမ်းချောင်း)၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း- သတင်းထောက် မြင့်အောင် (အလုံ) ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေး... အောင်ပွဲရအားကစားအသင်းများအား ဂုဏ်ပြုပွဲ တိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်း တက်ရောက်... စာဖတ်ခန်းဖွင့်ပွဲ တောင်ဥကကလာပ၌ ကျင်းပသက်ကြီးပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်းလေဘေးကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများပေးအပ်... အာဆီယံပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ တက်ရောက်ခဲ့... စာကြည့်တိုက်အဆောက်အအုံသစ်ဟင်္သာတခရိုင် အင်္ဂပူမြို့ နယ်၌ဖွင့်.. မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်...လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃၇) လျှောက်လွာခေါ်ယူ... သာမညဖလ၊၊ သုတ္တန်လှ ဟောပြတန်ဆောင်မုန်း-ဆောင်းပါး- ဖိုးရန်နိုင်(ကျောက်ကြီး)... တောင်ပိုင်းဒေသများ မိုးဆက်လက်ရွာနိုင်... ဝန်ကြီး ဒေါက်တာကျော် မြင့်အားကုလ သမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှ ဒုတိယ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်လာရောက် တွေ့ဆုံ... ဘူမိဗေဒဘွဲ့ရ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းစာကြည့်တိုက်များအတွက် စာအုပ်စာစောင်များလှူဒါန်း... ပြည်မြန်မာသတင်းဂျာနယ် ဖြန့်ချိ... ကြက်ခြေနီရှေးဦးပြုစုခြင်း (အခြေခံ)သင်တန်းဖွင့်လှစ်... ထားဝယ်မြို့ ကျောက်ရပ်ကျေးရွာ၌ နှလုံးလှစာကြည့်တိုက်ဖွင့် စာဖတ်ရှိန်မြင့်မားရေးပညာပေးဟောပြော... မြန်မာ့တိုင်းရင်ဆေးသေတ္တာများ တောင်ကြီးမြို့ ၌ ဖြန့်ဝေပေးအပ်... စစ်ကိုင်းအသင်း (ရန်ကုန်) စုပေါင်းအလှူပွဲကျင်းပမည်... မူဆယ်မြို့နယ်ဥက္ကဌဖလားအလွတ်တန်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲဆုချီးမြှင့်... ဒီမောဆိုမြို့နယ်ဥက္ကဌဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဖွင့်.. လူထုကျန်းမာရေးလုပ်သား သင်တန်းဆင်းပွဲ စဉ့်ကူးမြို့၌ ကျင်းပ... မှုခင်းကျဆင်းရေး မြန်အောင်၌ ဟောပြော တနိုင်းမြို့နယ်သာယာလှပရေးဆောင်ရွက်... အခြေခံစာကြည့်တိုက်ပညာဆင့်ပွားသင်တန်းဖွင့်လှစ်... မိုးကောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးဖွင့်... ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်အချပ်ပို (၂၄)မျက်နှာပါရှိ
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ စီအယ်လ်အမ်ဗွီနှင့် အက်မက်စ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ရန် ကမေ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားသော နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်အား နေပြည်တော်လေဆိပ်၌ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်... ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း... သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကင်းဝေးရေး ပြည်သူများ ပူးပေါင်းကာကွယ်... တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်စိုးသိန်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွဦးလာ​ရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီး ဌာနသင်တန်းများဆင်းပွဲ ကျင်းပ... ရေဦးမြို့ အထက(၁) ကျောင်းသားဟောင်းများအာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... ရွေတိဂုံစေတီတော် မသိုးသင်္ကန်းရက်လုပ် ကပ်လှူပွဲနှင့် တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲတော် စည်ကားစွာကျင်းပမည်... ဟိုချီမင်း-ရန်ကုန်-ဟိုချီမင်းလေကြောင်းခရီးစဉ် စတင်ပြေးဆွဲခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ... ငွေကျပ်( ၁ဝဝ)တန်စာပို့တံဆိပ်ခေါင်အသစ်ရောင်းချမည်။။။ ဒဂုံ မြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်အတွင်းကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်းကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့်အလုံဓါတ်အားပေးစက်ရုံအားကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ပြည်မြို့၌မှုခင်းဆိုင်ရာပညာပေးဟောပြော... ကလော/အေးသာယာ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းသားဟောင်းများအလှူငွေပေးအပ်ပွဲကျင်းပ... ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ ထိုင်းနိုင်ငံ၌သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့... တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်မောင်ဝင်း ပုသိမ်မြို့တွင်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ကြည်ရှုစစ်ဆေး... အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းဝေးကျင်းပ... တီးတိန်၌ဆိုလိုပြားလှူဒါန်း ... အမျိုး သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း ကြေညာ... တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း ကြေညာ... တောင်ပိုင်းဒေသများ မိုးဆက်လက်ရွာနိုင်... ကျန်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်းများအားဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်... ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေး(စံပြ)အထူးဇုန်၌ မိုးစပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့နေမှုများ လှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေး... ၂ဝ၁ဝခုနှစ် နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ပြပွဲကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ တတိယအကြိမ်စည်းဝေး... EPS အရ ကိုးရီးယားသို့အလုပ်သမားများစေလွှတ်ရန်MOU လက်မှတ်ရေးထိုးတစ်နှစ်သက်တမ်းဖြင့်စာရင်း သွင်းထားသူအလုပ်သမား ၁၇၇၁ ဦးရှိ... ဆဇူကီး ဖလားပွဲဝင် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် ခြေစမ်းကစားမည့် တရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ် ဒါလီယံအသင်းရောက်ရှိ... ကိုရီးယားအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများသတိပြုရန် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက အသိပေး... တိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးထွဋ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ကြည်ရှုစစ်ဆေး... ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)တံခွန်စိုက်ဒိုင်း ပြေး၊ ခုန်၊ ပစ်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ၊ ပိတ်ပွဲနှင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပ... သတိပေး နှိုးဆော်ချက်...(၁၆)ကြိမ်မြောက်အားကစားပြိုင်ပွဲတရုတ်နိုင်ငံရွှေအများဆုံနှင့် ဦးဆောင်နေ (ကိုသစ္စာ)... ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃၇) ဖွင့်လှစ်မည်...ဒို့ကျေးရွာဂျာနယ်ထွက်ပါပြီ... အများပြည်သူသိရှိရန်အသိပေးနှိုးဆော်ချက်... ကျန်းမာစွာ ပြုမူနေထိုင်ရေးတောင်ငူ၌ပညာပေးဟောပြော... စာကြည့်တိုက အ ဆောက် အအုံမူဆယ်၌ပန္နက် တင်... စာကြည်တိုက်ပညာဆင့််ပွားသင်တန်းစဉ့်ကိုင်မြို့ ၌ ဖွင့်လှစ်... မူးယစ်ဆေးဖြတ်ကုသခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး သင်တန်းဆင်းပွဲ တာချီလိတ်မြို့၌ ကျင်းပ... မြို့သာယာလှပရေးမိုးညှင်း၌ ဆောင်ရွက်... ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ သင်ကြားပေးလျက်ရှိ... ကျိုက်လတ်မြို့နယ်အသင်းအာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် စာပေဟောပြောပွဲကျင်းပမည်... ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်... ထူးခြားသည့်ညအပူချိန်များ... ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွအချပ်ပို (ဂ) မျက်နှာပါရှိ... စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးအလှတိုးနေသော မြို့ညောင်တုန်း (သတင်းနှင့်ဓါတ်ပုံ-တင်ဝင်းလေး(ကြည့်မြင်တိုင်)... Orange Supermarket ၏ Korea Food Fair 2010 ကျင်းပ
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ ကျန်ရှိသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏အမည်စာရင်းအားဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်... အဖိုးတန်သဘာဝသစ်တောများကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် (အယ်ဒီတာ့အာဘော် )... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းသန်း ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် အားကစားအသင်း များနှင့်တွေ့ဆုံ... ပညာရတနာစာကြည့်တိုက် အဆောက်အအုံသစ်ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၌ဖွင့်... အခြေခံပညာကျောင်းများသို့ စာသင်ခုံများပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဆန်းဦး တက်ရောက်... စစ်မှုထမ်း ဟောင်းများအား ဂုဏ်ပြပွဲကျင်းပ... စစ်တွေခရိုင်အတွင်းရှိလေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိ... ပုသိမ်ပညာရေးကောလိပ် မြတ်ဆရာပူဇော်မည်... အိမ်တိုင်ရာရောက်ကျန်းမာရေးစောင့်မှု ကမာရွတ်မြို့နယ်၌ဆောင်ရွက်... ဖလားဝါးနယူးစ်ဂျာနယ် ထွက်ရှိ... ဝန်ကြီးဦးစိုးနိုင်အား လာအသို အံ မတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ... မြစ်ကြီးနားမြို့ရှောင် ပြောင်းဖူးစေ့ကျောက်စီလမ်း _ သတင်းခရီးသည် - သတင်းထောက် ထွန်းဇော် (စမ်းချောင်း)၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း - သတင်းထောက် မြင့်အောင် (အလုံ) မြိုင်မြို့နယ် မိုးရာသီအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ... မော်လမြိုင်စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်းအာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... အဆင့်မြင့်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံဖွင့်ပွဲ ကာကွယ်ရေးဝန် ကြီး ဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ တက်ရောက်အားပေးချီးမြှောက်... ဆဒူ နသ် မတ္မ နိုင်ငံ သမတ္မ ထံသံအမတ်ကြီး ဦးတင်ယုခန့်အပ်လွာပေးအပ်... တောင်ပိုင်းဒေသများ၌ နေရာကွက်ကျားမိုးရွာနိုင် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကာကွယ်ရေး တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ရန်လို... လူတိုင်းအစားအသောက်ဆင်ခြင်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်အောင်နေထိုင် မိတ္ထီလာမြို့ အထက(၁) ကျောင်းသား ကျောင်းသူဟောင်းများ (၁၄)ကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော မြန်မာဘိလိယက်အားကစားသမားနေသွေးဦးနှင့်ကျော်ဦးတို့အကြို ဗိုလ်လုပွဲတက်... KNU အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖျက်သမားများ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ကျိုက်ဒုံမြို့နယ်ခွဲသို့ လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဒေသခံပြည်သူအချို့ဒဏ်ရာရ... မြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်... ဘဏ်လုပ်ငန်းဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄)ဖွင့်ပွဲ ဝန်ကြီးဦးလှထွန်း တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား... ရေးမြို့၌ မီးသတ်ဝတ်စုံပေးအပ်... တနိုင်းစည်ပင်မြို့သာယာရေးဆောင်ရွက်... နေပြည်တော် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပ... ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်အချပ်ပို (၃၂) မျက်နှာပါရှိ... ထူး ခြားသည့် ညအပူချိန်များ
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း... ဆီးချို သွေးချိုရောဂါကာကွယရေး ကျန်းမာရေးအသိဖြင့် စားသောက်နေထိုင်... ခြေလျင်နှင့်တောင်တက်အဖွဲ့ဝင်များအား အောင်နိုင်ရေးအလံပေးအပ်ပွဲ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇေယျာအောင် တက်ရောက်... လမိုင်းမြို့၌စာကြည့်တိုက် ပန္နက်တင်... ရေစီးရေလာကောင်းရေးသနပ်ပင်၌ ရေမြောင်းများတူးဖော်... ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ထားဝယ်၌ ဟောပြော... အင်ဂျင်ဝိုင်နှင့် စက်ဆီ ချောဆီများအရောင်းမြှင့်တင်ပွဲ စတင်ကျင်းပ... အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း... တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း... ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေး ဝန်ကြီး ဦးခင် အောင်မြင့်တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား... နေပြည်တော်ပထမဆုံးအကြိမ် နေပြည်တော်-မန္တလေး-နေပြည်တော် မိုင် ၃၉ဝခရီးရှည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်... ရွေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းသို့အလှူငွေပေးအပ်... မြန်မာ-ဗီယက်နမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှ င်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်... ဖီနိုင်းပရိုပါနော်လမင်း၏ဆိုးကျိုးများအကြောင်း ဟောပြောပွဲကျင်းပ... ရမည်းသင်း၌ မိုးစပါးစံ ကကွက် ရိတ်သိမ်း... ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်... မုန်တိုင်းသင့်ဒေသများပြန်လည်ထူထောင်ရေး တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... မြို့ရေပေးဝေရေး ဆောင်ရွက်နေမှုများ ဒုတိယဝန်ကြီးဦးတင်ငွေ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... မြေတိုင်းသင်တန်းဖွင့်မည်လမ်းပြုပြင်ဖောက်လုပ်၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရေးနှင့် လွဲပြောင်းပေးရေး (B.O.T) ပဋိညာဉ်စာချုပ်ချုပ်ဆို... တန်ဆောင်တိုင်အထူးစျေးရောင်းပွဲ ကျင်းပမည်... လက်လီရောင်းချခြင်းသင်တန်းဖွင့့််မည်... နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားများပွင့်ဖြူမြို့နယ် ချည်မျှင်နှင့်အထည်စက်ရုံ၌ပေးအပ်... စောင့်ကြည့် သတင်းဂျာနယ်ထွက်ရှိ... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဘ) ဦးအောင်ဆန်းအား ပြစ်ဒဏ်အားလုံးကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်ခြင်း... တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသများ မိုးဆက်လက်ရွာနိုင်... ဗဟန်း အမျိုးသမီးဆေးရုံမွမ်းမံပြင်ဆင်ပြီးစီးခြင်း ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ... နိုင်ငံတော် အစိုးရပိုင်မော်တော်ယာဉ်မသုံးစွဲနေ့... မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းရှင်များအား ထောက်ပံ့ငွေလှူဒါန်း... ၂၀၁၀ခုနှစ် နှစ်လည်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ နေပြည်တော်၌ ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမည် ပြည်ပရတနာကုန်သည်များ သွားလာနေထိုင်စားသောက်မှုအဆင်ပြေလွယ်ကူစေရေး (သတင်းဆောင်းပါး - တင်ထွေး.ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း - ကိုထွေး)... ထူးခြားသည့်ညအပူချိန်... ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်အချပ်ပို (ဂ)မျက်နှာပါရှိ
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နေပြည်တော်၌ ပထမဆုံး ပုဂ္ဂလိက ဥတ္တ ရသီရိဆေးရုံဖွင့်... ဝေဒနာရှင်များ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကုသမှုခံယူနိုင်တော့မည်... ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း... အရည်အချင်းပြည့်ဝသော လူကောင်းလူတော်လေးများဖြစ်ရေး ပြုစုပျိုးထောင်... ဖျာပုံမြို့ စံပြအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းမြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... ရန်ကုန်ဘူတာကြီးနှင့် တိုင်းဆက်သွယ်ရေးစခန်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... အထူးအယူခံခုံရုံးနေပြည်တော်၌ ရုံးထိုင်ကြားနာ... မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် ပညာပေးဟောပြောပွဲ သင်္ဃန်းကျွန်း အထက( ၂)၌ ကျင်းပ... အမျိုး သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း... ကျန်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်း အား ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်.. နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ပြပွဲကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ ညှိနှိုင်းစည်းဝေး... နိုင်ငံတော်အစိုးရဌာနပိုင် မော်တော်ယာဉ်မသုံးစွဲရနေ့... ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ရခိုင်ပြည်နယ် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ဒေသများ၌ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိ... ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ ညောင်လေးပင်မြို့၌ ကျင်းပ... ၂ဝ၁၁ခုနှစ် မြဝတီပြက္ခဒိန် ထွက်နေပြီ... လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် လက်တွဲချီတက်ကြပါစို့(ဆောင်းပါး-ဥပဒေလေ့လာသူတစ်ဦး)... ကိုရီးယားတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ရန် အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ၌ လျှောက်လွာတင်စာရင်းရေးသွင်းထားသူများ Passport သက်တမ်းရှိနေရန်လိုအပ်... ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ပညာသင်နှစ် သင်တန်းများစတင်ဖွင့်လှစ်မည်... မိုးစပါးအထွက်မှန်ကန်ရေး စံကွက်ရိတ်သိမ်း... တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသများ မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်... ဆင်ဖြူကျွန်းအသင်း(ရန်ကုန်) သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲကျင်းပမည်... ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆင့်ပွားသင်တန်း တာချီလိတ်ခရိုင်၌ ဖွင့်လှစ်... ရေမြောင်းကျောက်ရိုး စီမှုလုပ်ငန်းများမန္တလေးမြို့တော်ဝန် စစ်ဆေး... စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်... တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်တင်မောင်၀င်း သာပေါင်းမြို့ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကျောက်ချောင်းကြီးတံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ကြည်ရှု စစ်ဆေး... ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံအတွက် သူနာတင်ယာဉ်တစ်စီး ပေးအပ်လှူဒါန်း... လူငယ်ပန်းချီပြိုင်ပွဲ ၂ဝ၁ဝ ကျင်းပ... စာပေဗိမာန်ထုတ်သုတပဒေသာစာစောင် ဖြန့်ချိ... ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့တွင် ပူးတွဲလေ့ ကျင့်ရန် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် တင်းနစ်အဖွဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံထွက်ခွာ... ဟိုချီမင်း-ရန်ကုန်-ဟိုချီမင်း တိုက်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်း စတင်ပြေးဆွဲမည့် ခရီးစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ... ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်အချပ်ပို (၄)မျက်နှာပါရှိ... ထူး ခြားသည့် ညအပူချိန်များ
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ဆဌအကြိမ် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက ၄၇ ပါးစုံညီ ဒွါဒသမအစည်းအဝေး ကျင်းပမည်... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် (၅)ကြိမ်မြောက် စီအယ်လ်အမ်ဗွီ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် (၄)ကြိမ်မြောက် အက်မက်စ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်မည်... ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနှင့် မဝင်းမမ(ခ)အငယ်လေးတို့၏ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အထူးအယူခံမှုများ အမိန့်ချမှတ်ခြင်း...ကိုရီးယား စကားပြောပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်...နိုင်ငံတော်အစိုးရဌာနပိုင် မော်တော်ယာဉ်မသုံးစွဲရနေ... လမ်း၊ တံတားများ၏ကျေးဇူးကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ဘဝ တိုးတက်စည်ပင်(အယ်ဒီတာ့အာဘော်)... ကရင်ပြည်နယ် အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်းစုံအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဘတ်စကက်ဘော ဗိုလ်လုပွဲကျင်းပ... အင်းစိန်စက်မှုသိပ္ပံ(လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန) အာစရယိ ပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း... အထက်သံလွင်(မိုင်းတုံ)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နားလည်မှုစာချွန်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ... ကရာတေးဒိုပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်... ကျိုင်းတုံမြို့ အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်သန်းထွန်းဦး ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ကမ္ဘာ့ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့... ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ၏ သတိပေးလက္ခဏာများ... ပဲခူးမြို့ ဥသာမြို့သစ် အထက(၅) မြတဆ် ရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... လေအေးပေးစက်အရောင်းပြခန်းနှင့်မန္တလေးရုံးခွဲဖွင့်ပွဲကျင်းပ... ဝန်ကြီးဦးခင်မောင်မြင့် မန္တလေး-လားရှိုး-မူဆယ်လမ်းပေါ်ရှိ သီပေါတံတားတည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်းများကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ကေတုမဏီ(တောင်ငူ) မြို့တည် နန်းတည်နှစ် ၅၀၀ ပြည့်ခဲ့ပြီ -ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု သတင်းမှတ်စု (ရေးသူ - တက္ကသိုလ် ပွင့်သူအောင်)... ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုရမည့် အမျိုးသားရေးအောင်ပွဲ (ဆောင်းပါး-မြတ်ဘုန်းလူ)... ရွေတောင်-ပြည်ဒေသကောလိပ်-ပြည်ကောလိပ် (၁၉၇၆-၁၉ ၅)ပထမအကြိမ် အာစရိယပူဇော်ပွဲ... KNU အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ အဖျက်သမားများက ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့သို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် တစ်ဦးသေဆုံး၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့... တပ်မတော် ကွန်ပျူတာနှင့်နည်းပညာသိပ္ပံ အင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းသားများလျှောက်လွှာခေါ်ယူမှုအား ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း... ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. အာဆီယံအသင်းကြီးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား ထောက်ခံသွားရန်အသင့်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံဥက္ကဋက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် ... ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း... အမျိုးသားလွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း... တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း... တိုးတက်လာမည့်ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ကုန် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ (အယ်ဒီတာ့အာဘော်)... အလွန်အားကောင်းသည့်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး "ဂီရိ"တိုက်ခတ်ခဲ့သော်လည်း (ဆောင်းပါး- တင်ငွေ- မိုး/ဇလ)... ရန်ကုန်မြို့တော်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေး တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်း တက်ရောက်မှာကြား... တောင်ကြီးမြို့ အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများပြပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဆန်းဦး တက်ရောက်... မီးသတ်ဦးစီးဌာန ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် မီးသတ်စခန်းများစစ်ဆေး... ကျန်းမာဖွံ့ ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ဆားလင်းကြီး၌ ကျင်းပ... အလိုအလျောက် မော်တော်ယာဉ် မှတ်တမ်းတင်စနစ် မိတ်ဆက်... ကျောက်တန်းမြို့နယ်၌ စံကွက်ရိတ်သိမ်း... ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ်ထွက်ရှိ... (၁၆)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ၌ ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အားကစားအဖွဲ့များ ကွမ်ကျိုးမြို့သို့ထွက်ခွာ ... ကော့သောင်းမြို့နယ် ဒေသဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်မောင်ဌေး ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... မြေပုံမြို့နယ်အသင်း(ရန်ကုန် ) လေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် ငွေနှင့်ပစ္စည်းများ လက်ခံလျက်ရှိ... မြေပုံ၊ ကျောက်ဖြူနှင့် ပေါက်တောမြို့နယ်တို့ရှိ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ဒေသများ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ကွင်းဆင်းဆေးကုသ... အမှုကြားနာခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်း မန္တလေး၌ဖွင့်... MFF Futsal Championship ၂ဝ၁ဝ ပြိုင်ပွဲ တစ်နိုင်ငံလုံးမှအသင်းများပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ထား... အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန သင်တန်းများဆင်းပွဲ ဝန်ကြီးဦးခင်မောင်မြင့် တက်ရောက်ချီးမြှင့်... ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ကျောင်းပေါင်းစုံ ဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲကျင်းပမည် ... ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်များ လားရှိုးခရိုင်၌ဆောက်လုပ်... မြို့တွင်းလမ်းများ လမ်းပခုံးမြှင့်တင်ခြင်းရွေကူ၌ ဆောင်ရွက် ... ထူးခြားသည့်ညအပူချိန်များ... ဘက္ကရီအီးဒ်နေ့ အလုပ်ပိတ်ရက်ကြေညာ ...
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ကယားပြည်နယ် ပညာရေးဥယျာဉ်အတွင်းမှ လှပစွာဖူးပွင့်နေသောပန်းကလေးများသတင်းဆောင်းပါးနှင့်ဓာတ်ပုံ - သက်ထက်ကို (ရွေတိုင်မြေ - ဘော်ဂါသား) .. ကသာ-ဧရာဝတီတံတား (စင်းခန်း)ရထားမ်းပိုင်းလုပ်ငန်းခွင်သို့တစ်ခေါက် သတင်းခရီးသည် “ သတင်းထောက် ထွန်းဇော် (စမ်းချောင်း)၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း “ မြင့်အောင်(အလုံ)... လေဖြတ်ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ပါ (ဒေါက်တာ ကောင်းမြတ်ကျော်)...ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အတွင်း စိမ်းလန်းစိုပြည်နေသည့် ပဲခူးရိုးမကျွန်းနှင့်အခြားစိုက်ခင်းများဵ သတင်းဆောင်းပါးနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း- ခင်မောင်သန်း(စက်မှု)... ရခိုင်ပြည်နယ် လေဘေးဒဏ်ကြုံတွေ့ရသည့် ဒေသခံပြည်သူများအတွက် အလှူငွေနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်း... မြန်မာအမျိုး သမီးတို့၏ဂုဏ်ရည် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း (အယ်ဒီတာ့အာဘော်)... တိုင်းမှူးတံခွန်စိုက်ဒိုင်း ဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲကျင်းပ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလွင် တက်ရောက်ဆုချီးမြှင့်... လမ်းပလက်ဖောင်းလွိုင်ကော်၌ ပြု ပြင်... ခရိုင်ဥက္ကဋဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကျိုင်းတုံ၌ဖွင့် သံလွင်တံတား(တာပါး) ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကျော်ဇော ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ပြည်သူများအတွက် အလှူငွေနှင့်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်း... ဟင်္သာတ၌ မိုးစပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်း... မြန်ပြည်တစ်ဝန်း သာယာမည်... တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာကျင်းပနိုင်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကို တရုတ်ကြိုဆို... အိုင်တီနည်းပညာသင်တန်းများ ထပ်မံဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်... ဉာဏ်ရည်မမီသူများ အားကစားပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်... နိုင်ငံတစ်ဝန်း အောက်တိုဘာလအတွင်း မီးလောင်မှု အကြိမ်(၅ဝ) ဖြစ်ပွား... ပြည်မြန်မာသတင်း ဂျာနယ် ဖြန့်ချိ... စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲများကျင်း ပမည်... ကေအင်န်ယူအကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူအဖျက်သမားများက မြဝတီမြို့အတွင်းသို့ လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် ဒေသခံပြည်သူအချို့ သေဆုံး/ဒဏ်ရာရရှိခ့ခြင်းနှင့် ဘုရားသုံးဆူမြို့ကို ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်း... ကမ္ဘာ့ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ မအူပင်- တွံတေး-လှိုင်သာယာ လမ်း ဖောက်လုပ်​ရေးလုပ်ငန်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်ညွန်မှူး ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ဆဋမအကြိမ်မြောက် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဖလား တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ် မိုးရာသီကြက်တောင်ရိုပြိုင်ပွဲဆုချီးမြှင့် ... ကျေးလက်ရေပေးရေးစက်ရေတွင်းတူးဖော်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်း တိုင်းမှူးတံခွန်စိုက်ဒိုင်း ပြေးခုန်ပစ် ဆုချီးမြှင့်ပွဲ တက်ရောက်... ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုင်း မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်း ကြည့်ရှု စစ်ဆေး ယာဉ်တင်တယ်လီဖုန်းဖွင့်ပွဲ မချမ်းဘောမြို့၌ကျင်းပ... ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ မုန်တိုင်းသင့်ဒေသများ၌ဆောင်ရွက်... စာကြည့်တိုက်အ ဆောက်အအုံ သစ်ပူတာအို၌ဖွင့်... အရေးပေါ်တိုင်းရင်း ဆေးသေတ္တာများသီပေါမြို့နယ်၌ ပေးအပ်... ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ... စာကြည့်တိုက်အဆောက်အအုံသစ် မိုးမောက်၌ ဖွင့်လှစ်
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ဥက္ကဋ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဘုရင်ထံ သဝဏ်လွာပေးပို့... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ထံ သဝဏ်လွှာပေးပို့... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံတမန်များ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ ဆန္ဒမဲပေးမှု ကြည့်ရှုလေ့လာ... ကြီးပွားတိုးတက်လိုသူတိုင်း အလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုပါသည် (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့နှင့် ဖလမ်းမြို့တို့၌ ကျင်းပသည့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို သံတမန်များ ကြည့်ရှုလေ့လာ... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံတမန်များနှင့် စစ်သံမှူးများ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမှုများကို ကြည့်ကြည့်ရှုလေ့လာ... မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ လွတ်လပ်ပျော်ရွင်စွာ ဆန္ဒမဲပေးနေမှု မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ ၌ သံတမန်များ ကြည့်ရှုလေ့လာ... နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဦးဉာဏ်ဝင်းကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့ သဝဏ်လွာပေးပို့... ဆန္ဒမဲများ ရေတွက်... မကွေးမြို့ ၌ ၂ဝ၁ဝခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမှုများ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံတမန်များ ကြည့်ရှုလေ့လာ... စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မံခရိုင် မံရွာမြို့ ၌ကျင်းပသည့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ သံတမန်များနှင့် သတင်းထောက်များ ကြည့်ရှုလေ့လာ
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT.နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ဥက္ကဋ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဘုရင်ထံ သဝဏ်လွာပေးပို့... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ထံ သဝဏ်လွှာပေးပို့... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံတမန်များ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ ဆန္ဒမဲပေးမှု ကြည့်ရှုလေ့လာ... ကြီးပွားတိုးတက်လိုသူတိုင်း အလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုပါသည် (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့နှင့် ဖလမ်းမြို့တို့၌ ကျင်းပသည့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို သံတမန်များ ကြည့်ရှုလေ့လာ... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံတမန်များနှင့် စစ်သံမှူးများ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမှုများကို ကြည့်ကြည့်ရှုလေ့လာ... မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ လွတ်လပ်ပျော်ရွင်စွာ ဆန္ဒမဲပေးနေမှု မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ ၌ သံတမန်များ ကြည့်ရှုလေ့လာ... နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဦးဉာဏ်ဝင်းကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့ သဝဏ်လွာပေးပို့... ဆန္ဒမဲများ ရေတွက်... မကွေးမြို့ ၌ ၂ဝ၁ဝခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမှုများ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံတမန်များ ကြည့်ရှုလေ့လာ... စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မံခရိုင် မံရွာမြို့ ၌ကျင်းပသည့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ သံတမန်များနှင့် သတင်းထောက်များ ကြည့်ရှုလေ့လာ
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၌ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်တော့မည် ပုလဲမြို့နယ်၌လည်း ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ခိုအောင်းမှုအလားအလာ လွန်စွာကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရ ... ဆန္ဒမဲပေးခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီအောင်ပန်းကို ဆွတ်လှမ်းကြပြီ (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုဖလှယ်ရေးအစီအစဉ် လျှောက်ထားနိုင်... ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဘမောင် ထန်တလန်မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံ... ၂ဝ၁ဝခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အထူးထုတ် စာပို့တံဆိပ်ခေါင်းသစ်ရောင်းချမည်... မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နေ့ အခမ်းအနား ချောင်းဆုံမြို့နယ်၌ ကျင်းပ... မျက်စိလည်လမ်းမှားလာသော မိကျောင်းလူကိုရန်ရှာသော်လည်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့... အမှတ်(၃)ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းနှင့် ကျေးလက်လမ်းများ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးတင်ငွေ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ြည်သူ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြဦး ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... မိုးညှင်းခရိုင်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇေယျာအောင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး...မြန်မာ့အိုင်တီအဆင့်အတန်းတိုးတက်မြင့်မားရေးကြိုးပမ်း ဖော်ဆောင်ပေးနေသောရတနာပုံဆိုင်ဘားစီးတီး
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. မြန်မာတို့၏ လွတ်လပ်၍ တရား မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ (ဆောင်းပါး-ဖိုးရေချမ်း)... ပြည်ထောင်စု၏ရှေ့ခရီး(ကဗျာ-လူငြိမ်းသစ်)... ဆန္ဒမဲပေးလို့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ကြပါစို့ (အယ်ဒီတာ့ အာဘော်)... မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ပြည်သူများအတွက် အလှူငွေနှင့်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်း... ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့အကြီးဟောင်း မစ္စတာ ဗစ်တာ၊ အက်စ်၊ ချာနိုမြာဒင် ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး... တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် ဘောလုံးကွင်းများ၊ အားကစားကွင်းများပြီးစီးပါက အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲများကို အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပနိုင်မည်... ကျေးလက်ရေပေးရေး ရွေကူ၌ ဆောင်ရွက်...မြန်မာနိုင်ငံဘူမိသိပ္ပံအသင်း ဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ရန်ထွက်ခွါ... နေပြည်တော် ပထမဆုံးအကြိမ် မိုင် ၃၉ဝခရီးရှည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲကျင်းပမည်... သောင်းကျန်းသူများ ထောင်ထားသည့် မိုင်းတစ်လုံး နင်းမိပေါက်ကွဲသဖြင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ... ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံကျင်းပရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ... အမျိုးသားအားကစားဥယျာဉ်စီမံကိန်း(မန္တလေး)၌ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဘောလုံးကွင်းတည်ဆောက်မည် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲသာမက အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲများကိုပါ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနိုင်ရေးမျှော်မှန်း... စီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အတွင်းရေးမှူး(၁) သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး ဆွေးနွေးမှာကြား
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးကောင်စီဥကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေထံ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ခန့်အပ်လွာပေးအပ်... နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေထံ အီတလီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ခန့်အပ်လွာပေးအပ်... ‘‘ကျွန်ုပ်တို့ မဲပေးကြမည် (နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအား ကျင့်သုံးခြင်း)’’ဆောင်းပါး-မြင့်မောင်(Phil Q)... မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ က ဦးဆောင်တင်သွင်းသည့် နျူကလီးယား လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး အဆိုမူကြမ်းကို (၆၅)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ပထမကော်မတီတွင် အောင်မြင်စွာ အတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့... ပညာတတ်လူ့စွမ်းအား အရင်းမြစ်များကိုမွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိသော ပညာရေးကဏ္ဍြမှင့်တင်ဆောင်ရွက်မှုများ(ဆောင်းပါး-ဌေးအောင်)... ပြည်သူ့ အကျိုးပြု ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်... ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ရှင်းလင်းပွဲ ဘားအံမြို့နယ်၌ ကျင်းပ... ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်း လေဘေးသင့်ပညာရေးမိသားစုများအား တွေဆုံအားပေး... နိုဝင်ဘာ(၇) ရက်တင်ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲ၌နိုင်ငံတစ်ဝန်းမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ စနစ်တရေတ ဆန္ဒမဲပေးနေမှုနှင့်မဲ​ရေတွက်မှုတို့ကို ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံခြားသံတမန်များ၊ ပြည်တွင်းအခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပြည်တွင်းရှိနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များဖိတ်ကြားထား ပြည်တွင်းရှိဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းများသတင်းထောက်များအား ဖိတ်ကြားထား... ရန်ကုန်မြို့ လူငယ်အားကစားလေ့ကျင့်ရေးစခန်း (သုဝဏ္ဏ) အဆင့်မြှင့် တိုးချဲ့တည်ဆောက်မည် ပွဲကြည့်ပရိသတ် (၂ဝဝဝဝ)ဆံ့ မှ (၅ဝဝဝဝ)ဆံ့အထိ တိုးချဲ့မည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ လူငယ်အားကစား လေ့ကျင့်ရေးစခန်း(သဝု ဏ္ဏ) အဆင့်မြှင့် တိုးချဲ့တည်ဆောက်မည့် အစီအမံများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည်များမှာကြား... ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ တောင်ဥက္ကလာပ၌ ကျင်းပ... အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည် စက်ရုံလုပ်သားများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကြည့ ရှုအားပေး... ဂျပန်နိုင်ငံမှ မီးသတ်ယာဉ်များနှင့် သူနာတင်ယာဉ်များ မီးသတ်ဦးစီးဌာနသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်း... ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း သရုပ်ပြပွဲ ညောင်လေးပင်၌ ကျင်းပ
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေထံ အီဂျစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ခန့်အပ်လွာပေးအပ်... နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေထံ ဘရာဇီးလ်ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ခန့်အပ်လွာပေးအပ်... ပြည်သူတို့၏မဲတစ်ပြားသည်- ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်မည့် ရွေအုတ်တစ်ချပ်ဖြစ်၏ (ဆောင်းပါး-ခိုင်မျိုးညီလာအောင်)... မဲရုံသို့အရောက်သွား ဆန္ဒမဲများပေးကြပါစို... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အထူးထုတ် စာပို့တံဆိပ်ခေါင်းသစ် ရောင်းချမည်... လူတိုင်းသက်တမ်းစေ့အသက်ရှည်စွာနေနိုင်ရေးနှင့် လူတိုင်းရောဂါဘယကင်းရှင်းရေး ကျန်းမာရေးကဏ္ဍက ကြီးမားသော အတိုင်းအတာတစ်ရပ်အဖြစ်ဖော်ဆောင်နိုင်... ရေွှဥရုအစမ်းတွင်းအမှတ်( ၁) စတင်တူးဖော်သည့်အခမ်းအနား ဝန်ကြီး ဦးလွန်းသီ တက်ရောက်... မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်/စက်မှုအသင်းချုပ်နှင့် မစ်ဆူဘီရှီကော်ပိုရေးရှင်းမှ ဧည့်သည် တွေ့ဆုံ... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်မြို့နယ်များ၌ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး မုန်တိုင်းလွန်ကာလ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ နိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူ့တပ်မတော်တို့ပူးပေါင်းဆာင်ရွက်ရန်မှာကြား
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး အထူးစီးပွားရေးဇုန် (Special Economic Zone) စတင်ထူထောင်မည် ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း၊ စက်မှုဇုန်နယ်မြေနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မော်တော်ကားလမ်းနှင့် ရထားလမ်းများ ဆက်သွယ်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း မူဘောင်သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ... မီးလား၊ ရေလား၊ ဒီမိုကရေစီလား (ဆောင်းပါး-ရဲရင့်တင့်ဆွေ)... ရေကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာ... ရွေးကောက်ပွဲကြီးအောင်မြင်ရေး ပြည်သူများတက်ညီလက်ညီပါဝင် (အယ်ဒီတာ့ အာဘော်) ... မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိုက်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မြို့နယ်သတင်းထောက်များ တွေ့ဆုံ... ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံသံ အမတ်ကြီးအဖြစ် မစ္စတာနီလာဟတ်ဆိုင်ရာလတ်အား ခန့်အပ်ရန် သဘောတူညီ... လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ အကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများအား ဆေးဖိုးကုန်ကျငွေ ထောက်ပံ့ပေးအပ်
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် (၁၇ )ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ (၅)ကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ် အာဆီယံ-ရုရှား ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ အာဆီယံ-သြစတြေးလျ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံ-နယူးဇီလန် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်... ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ပြည်သူများကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသမ္မတအား တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး မြှင့်တင်မှု ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေး... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်အား ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် လာရောက်ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံ... ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ ငုယင်မင်ကျစ်ရက်အား နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်... (၁၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးဉဏ်ဝင်း တက်ရောက်၍ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုး... (၁၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများ ဝန်ကြီးဦးစိုးသာ တက်ရောက်၍ စီးပွားရေးဆိုင်ရာများဆွေးနွေး ... စစ်မှန်၍ တရားမျှတသော ၂ဝ၁ဝ နိုဝင်ဘာ (၇)ရက် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကို လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုကြပါစို့။ ဆောင်းပါး-တင်မြင့်(ရွေပြည်သာ)
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ခ့ ဲပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်အား နေပြည်တော်လေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်... မဲရုံကိုသွားလို့ မဲပေးကြပါစို့ (ဆောင်းပါး-မျိုးမြတ်မောင်)... ရှေ့ရေးကိုမျှော်တွေး၊လူကောင်းလူတော်များအား မဲပေးရွေးချယ်... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် (၁၃)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ဂျပန် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယား ထိပ်သီးအစည်းအဝေး အာဆီယံ-တရုတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံ+ ၃ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်... အာဆီယံ-ကုလသမဂ္ဂ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံအကြီးအကဲ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲများ၏ အလုပ်သဘောညစာစားပွဲ တက်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ ရှင်းလင်းပြောကြား... အာဆီယံနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံအကြီးအကဲ၊ အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲများ သီးသန့်အစည်းအဝေးသို့ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ဒုတိယအကြိမ် မဲခေါင်-ဂျပန် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT.ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ပေါ်ထွန်းရေး ပြည်သူများပါဝင် ဆန္ဒမဲပေး(ဆောင်းပါး)... မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်နှင့် ပြည်ပဧည့်သည်အဖွဲ့တွေ့ဆုံ... ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့၀င် ကျိုက်မရောမြို့နယ်၌ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း သရုပ်ပြမှုကြည့်ရှု... တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကွမ်ကျုး မြို့၌ ကျင်း ပမည့် အာရှအားကစားပြို င်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် မြန်မာ အားကစားအဖွဲ့ အား အောင်နိုင်ရေးအလံ ပေးအပ်... မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအ​ဝေးကျင်းပ
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT.ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်လှမင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရမှုများအတွက် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှု ကြည့်ရှုအားပေး... ဒီမိုကရေစီ အုတ်မြစ်ခိုင်မာရေး ဆန္ဒမဲပေးဖော်ဆောင်(ဆောင်းပါး)... သင်းခွဲနေသောပုဏ္ဏားများကို သတိထားရှောင်ရှားကြပါစို့ (ဆောင်းပါး)... စိန်လင်း (ခွဲစိတ်နှင့်ကင်ဆာပါရဂူ)၏ နယသာဂရ ပဋာန်းတရားတော်စာအုပ်ထွက်ရှိ... မြန်မာ့ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာပြပွဲ -၂ဝ၁ဝ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေတက်ရောက်...
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT.မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိပြီးသော နိုင်ငံရေးပါတီများက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွကော်မရှင်သို့ ယင်းတို့၏ ပါတီဝင်အင်အားစာရင်းများ လာရောက်တင်ပြ... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် တူရကီနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ထံ သဝဏ်လွာပေးပို့... ဆန္ဒမဲများပေးစို့လား မဲရုံဆီသို့ အချိန်မီသွား(ဆောင်းပါး)... မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ ပညာရည်ချွန်ဆုများချီး မြှင့်ပွဲနှင့်အဖွဲ့ဝင်အဆိုပြုလွာပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းတက်ရောက်အားပေးချီးမြှင့် ပညာရည်ချွန်ဆု ရရှိသူများအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ဆုငွေများပေးအပ်... ဂီရိမုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ပြည်သူများအတွက် အလှူငွေနှင့် ပစ္စည်းများပေးအပ်လှူဒါန်း... ၁၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော လေကြောင်းနှင့် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မုန်တိုင်းသင့်ဒေသအချို့မှ လေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ တပ်မတော်လေယာဉ်ဖြင့်ပေးပို့... သက်ကြီးရွယ်အိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသင်တန်း ထန်းတပင်မြို့နယ်၌ ဖွင့်လှစ် ...တပ်မတော်အုပ်ချုပ်ရေးမှ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးသို့ငြိမ်းချမ်းစွာအသွင်ကူးပြောင်းရေး (ဆောင်းပါး-မောင်စေတနာ)
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ရန် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားသော နငို ်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်အား နေပြည်တော်လေဆိပ်၌ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်... နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ ကြံခင်း၊ မြန်အောင်၊ ဟင်္သာတနှင့် ညောင်တုန်းမြို့နယ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ဆန္ဒမဲတစ်ပြားအလေးထား ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးကြမည်... နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေဖြန့်ချီ... ရထားလမ်ရော ကားလမ်းပါ ပါရှိမည့် ဧရာဝတတီ တံတား(ညောင်တုန်း) တံတားတစ်စင်းလုံးတည်ဆောက်ပြီးစီးမှု (၄၇)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးဖြစ်... မွန်ငြိမ်းချမ်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ လက်နက်အပ်နှံပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စေတနာကို နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့၊ ဒေသခံလူထုများနှင့်လက်တွဲပြီး ဒေသတွင်း အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်သွားမည်... တိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်း၊ ဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ၊ ဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်ဆွေနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးဦးဘုန်းဆွေတို့ မြေပုံနှင့် ပေါက်တောမြို့နယ်တဝိုက်ရှိ လေဘေးသင့်အိမ်ထောင်စုများအတွက် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများပေးအပ်ပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ပြည်သူ့အကျိုး သယ်ပိုးမည့်ကိုယ်စား လှယ် ကိုယ်တိုင်မဲပေးရွေးချယ်... ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်ကြောင်းစာလွှာ ဝန်ကြီး ဦးဉဏ်ဝင်းထံပေးအပ်... ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ နေပြည်တေခရိုင်၌ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှာကြား... ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဌအုတ်တွင်းမြို့နယ် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများနှင့်တွေ့ဆုံ... မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များအား သင်တန်းပို့ချ... နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဦးဉာဏ်၀င်း လာအိုနိုင်ငံတွင် စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့... သောက်ရေခပ်( ၂ ) ရေအားလျှပစ် စစ် စီမီ ကိန်း မြစ်ရေလွဲခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ စီမံကိန်းပြီးစီးပါက တစ်နှစ်လျှင် ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း ၆၀၄သန်းထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည်
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ကမ္ဘာ့ ရာသီဥတုမှာ ယခင်ကကဲ့သို့ ပုံမှန်အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပြောင်းလဲလျက်ရှိ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်တားဆီးရေး လုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ပြင်ဆင်ထား နိုင်ငံတော်က အခြေခံအဖြစ် တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည့် မိမိတို့၏ နေအိမ်များ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ရေး ပိုမိုခိုင်ခံ့အောင် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်... နိုင်ငံတော်အကျိုးသယ်ပိုးမည့်သူများအား ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ် (အယ်ဒီတာ့ အာဘော်)... ပျော်ပျော်ပါးပါးမဲရုံသွားမဲပေးကြစို့လား (ဆောင်းပါး)... ၁၉ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးမြေဧက ၂၃ဒသမ သန်းကျော်သာရှိလက်ရှိကာလတွင် စိုက်ပျိုးမြေဧက ၅၃ဒသမ ၁သန်းကျော်ရှိလာ... မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် နိုင်ငံခြားသင်္ဘော နှစ်စင်းအားတပ်မတော်(ရေ)က ကယ်တင်နိုင်ခဲ့... မြန်မာနိုင်ငံ၌ အကြီးဆုံး အိုင်စီတီပြပွဲ မကြာမီ ကျင်းပမည်... မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေး... လူ့ စွမ်းအားအရင်းအမြစ် လက်တွေ့စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းဖွင့်မည်...
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကကျသော ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှု ဆိပ်ကမ်းဖြစ် တန်ချိန် ၃၅ဝဝဝ သင်္ဘောကြီးများ ဆိုက်ကပ်နိုင်သည့် ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ရေး တိုးချဲ့တည်ဆောက်... သို့မှသာ နောင်တိုးတက်လာမည့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအခြေအနေနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိလာနိုင်မည် ဆိပ်ကမ်းများ ရေရှ ည်တည်တံ့မှုနှင့် သာယာသန့်ရှင်းမှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်... ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ပေါ်ထွန်းရေးကြိုက်သူကိုမဲပေးကြပါစို့... ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေအား ကိုရီးယားဧည့်သည်အဖွဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံ... (၉ဝ)ပြည့်နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ... ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ ဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဆွေနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဘုန်းဆွေတို့ ကျောက်ဖြူမြို့၌ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့ပစ္စည်းနှင့်ငွေများပေးအပ်... ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် မိုင်းယန်းတွင် မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံ... လွပ်လပ်ပြီးတရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင်ကျင်းပရန်စီဉ်ပြီးဖြစ် နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၇ ပါတီရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်... မိမိတို့အတွက် ပိုမိုအကျိုးပြုနိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ပြည်သူများစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်... ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ‘‘ဂီရိ’’တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ရေယာဉ်နှင့်ခရီးသည်များ အန္တရာယ်မရှိစေရေးအတွက် မုန်တိုင်းခိုရန် ယာယီရပ်နားခဲ့သည့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ရေယာဉ်များ ပြန်လည်ပြေးဆွဲ
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၌ကျင်းပမည့် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်မည်... လွတ်လပ်၍တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲပြည်သူများပါ၀င်ဆင်နွှဲ... ဝန်ကြီးဦးဇော်မင်းအား တရုတ်ဧည့်သည်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်းနှင့် ဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ စစ်တွေနှင့် အမ်းလေဆိပ်လုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပသော အာဆီယံပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေး ဝန်ကြီးဦးသိန်းအောင် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ ဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းအား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ စက်မှုပညာရှင်လာရောက်တွေ့ဆုံ... နန်နင်းမြို့ ၌တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲ ပြသလျက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ပြသ... လူနေမှုပုံစံနှင့် အများပြည်သူတို့၏ ရွေးချယ်မှုပြပွဲ-၂ဝ၁ဝ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ... ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းသင်တန်းဖွင့်... မဲရုံမှူး၊ ဒုတိယမဲရုံမှူးနှင့်မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များသင်တန်းမတ္ထီလာမြို့နယ်၌ဖွင့်လှစ်... ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်သို့ အားလျော့သွားပြီ
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ရခိုင်ပြည်နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ဝင် ရမ်းဗြဲ၌ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများရှင်းလင်းဆွေးနွေး... လမ်း၊တံတားများကြံ့ ခိုင်မှု ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းအား အတီ လသီ မတ္မ နိုင်ငံမှ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင် လာရောက်​တွေ့ဆုံ... အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ... မြေပြိုကျမှု အန္တရာယ်များမှ ကြိုတင်ကာကယ်တားဆီးရန် သတိ​ပေးနှိုးဆော်ချက်... ပူတာအိုခရိုင်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇေယျာအောင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ဆန္ဒမဲပေးခြင်း ရှင်းလင်းသရုပ်ပြပွဲ တောင်ကြီး၌ကျင်းပ... မဲရုံသရုပ်ပြလေ့ကျင့်မှု ရွာငံတွင်ကျင်းပ
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော်အလံ ဥပဒေ၊ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် ဥပဒေ၊ နိုင်ငံတော်သီချင်း ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံတော်အလံ နည်းဥပဒေများ၊ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နည်းဥပဒေများ၊ နိုင်ငံတော်သီချင်း နည်းဥပဒေများ ထုတ်ပြန်... ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သင်တန်း ရွေဘို၌ ဖွင့်လှစ်... ဇဝီ ဆေးသိပ္ပံပညာရပ်များ တက်ရောက်သင်ယူနိုင်... လယ်ယာ/ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဦးဌေးဦးအား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ ဧည့် သည်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ... မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း/ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးအေးမင်းသိန်းအား ဘဏာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီ ဌာန၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ဝတ္တရားများကို စတင်ဆောင်ရွက်သည့်နေ့မှစ၍အစမ်းခန့်ထားလိုက်သည်... ရေကြောင်းသတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ကြေညာ... မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ဥက္ကဋနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ပြည်ပဧည့်သည်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ... ပဥ္စမမြောက် ဆင်ဖြူတော်ရတနာသည်
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. စက်လေးလုံး တပ်ဆင်အား ၇၉ဝ မဂ္ဂါဝပ်ရှိသည့် ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း တစ်နှစ်လျှင် လျှပ်စစ်ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း ၃၅၅ဝ သန်း ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည် ယခုအခါ ဓာတ်အားပေးစက် (၁)၊ (၂ ) နှင့် (၃)တို့ လည်ပတ်ပြီး ဓာတ်အားထုတ်လွတ်ပေးနေပြီ... လူနေမှုပုံစံနှင့် အများပြည်သူ၏ ရွေးချယ်မှုပြပွဲ ရန်ကုန်မြို့ တပ်မတော်ခန်းမ၌ ကျင်းပမည်... ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းသင်တန်း ကျောက်မဲ၌ ကျင်းပ... သဘာဝဘေး အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပ... ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များရှင်းလင်းဟောပြော... ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန အရာထမ်းများ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းဆင်း... ဝန်ဆောင်မှုအား အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ရေယာဉ်၊ လေယာဉ်များ အချိန်မှန်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး အထူးဂရုပြု... ကမ္ဘာ့သင်္ဘောလုပ်ငန်းအကြောင်း သိကောင်းစရာအဖြာဖြာ စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီ... မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်/စက်မှုအသင်းချုပ်နှင့် ဂျပန်ဧည့်သည်တွေ့ဆုံ
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)ရှိ မြိုန့ ယ်များ ယခုအခါ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိနေပြီ... ၂ဝ၁ဝခုနှစ် နှစ်လယ်မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ နိုဝင်ဘာ ၁၇ရက်မှ ၂၉ရက်အထိနေပြည်တော်၌ ကျင်းပမည်... ယဉ်​ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန သမိုင်း သုတေသနဦးစီ ဌာနက မြန်မာ့ရက်စဉ်သမိုင်း(ပထမတွဲ) (အကြို သမိုင်း ကာလမှ ၁၉၄၅အထိ) မြန်မာ့ရက်စဉ်သမိုင်း (ဒုတိယတွဲ) (၁၉၄၅ မှ ၂ဝဝ အထိ) စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီ... ရွေးကောက်ပွဲ ဆန္ဒမဲပေးပုံ သရုပ်ပြပွဲ ကျောင်းကုန်းမြို န့ ယ်၌ ကျင်းပ... စပါးမျိုးသစ်များ အကဲဖြတ် ရွေးချယ်ပွဲကျင်းပ... ဆားငန်ဒဏ်ခံသောစပါးမျိုးသစ်များ စိုက်ပျိုးနိုင်မည်... အိမ်တွင်းသက်မွေးမှုလုပ်ငန်း သင်တန်းဆင်း... မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့ ၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့် ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုများဖြစ်ပွား သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတို့က လိုအပ်သည်များကူညီပေးလျက်ရှိ... မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင် ၁၈ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်း... မြန်မာနိုင်ငံ လက်ဝှေ့အဖွဲ့ချုပ်​ လေးလပတ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ... လူထုကျန်းမာရေးလုပ်သားသင်တန်း ပေါင်မြို န့ ယ်၌ ဖွင့်လှစ်... ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းသင်တန်း တောင်ငူမြို့နယ်၌ဖွင့်... တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိင်ငံ ရထားဝန်ကြီးဌာနမှ ချစ်ကြည်ရေးလက်ဆောင်အဖြစ် ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စက်ခေါင်းများ တတိယအကြိမ် လွဲပြောင်းပေးအပ်
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့တွင် မဲရုံအသီးသီးကို ဥပဒေပါသတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း ဖွင့်လှစ်ထားမည် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်အနေဖြင့် မည်သည့်ပါတီ၊ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှ မျက်နှာလိုက်ခြင်း၊ အခွင့်အရေးပေးခြင်းမရှိ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည် ... မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးခရိုင်နှင့် မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ... ဘဝမြင့် စာကြည့်တိုက်အဆောက်အအုံသစ်ဖွင့်ပွဲ ရွေပြည်သာမြို့နယ် သာဓုကန်ကျေးရွာ၌ကျင်းပ ... ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စက်မှုဇုန်ကော်မတီများအစည်းအဝေးကျင်းပ ... ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား... မစ္စတာအာမက်အိုဂူဇ်စီလခ်ခိုးလ်အား တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သဘောတူညီ... ဧရာဝတတီ တံတား ရတနာပုံ(မန္တ​လေးဘက်)အတက်လမ်း တံတားဖွင့်ပွဲ... တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်ဆန်းဦး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကြည့်ရှုစစ်ဆေး... သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး အစည်းအဝေးတက်​ရောက်ရန် မလေးရှားသို့ထွက်ခွါ ... Solar Project တပ်ဆင်လွဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် တောင်လည်ကျေးရွာ၌ ကျင်းပ... စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မြင့်မားရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း ဝန်ကြီး ဦးဌေးဦး တက်ရောက်မှာကြား ... ရုံးလုပ်ငန်းမွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား မန္တလေးမြို့တော်ဝန် ဦးဖုန်းဇော်ဟန် တက်ရောက်... ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းသင်တန်း မြစ်သားမြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်... သီတင်းကျွတ်လပြည့် (အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့)တွင် တိရစ္ဆာန်ဥယာဉ်(နေပြည်တော်)ဖွင့်လှစ်မည်
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. အဆင့်မြင့်နည်းပညာရှင်အင်ဂျင်နီယာများနှင့် သုတေသနပညာရှင်များ၏ စွမ်းပကားဖြင့် အမိနိုင်ငံတော်ကို ခေတ်မီဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်သည့် စက်မှုနိုင်ငံတော်အဖြစ်သို့မြှင့်တင်...တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်း ဒေသဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ ကြည့် ရှုစစ်​ဆေး...ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများနှင့် စိုက်ခင်းများ ဒုတိယဝန်ကြီးဦးသူရိန်ဇော် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ...ခရိုင်လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေး ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့် တက်ရောက်မှာကြား ... ပြည်သူ့ရေးရာ သင်တန်းဆင်းပွဲအရာရှိ များ တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပမည် ...ပြင်ဦးလွင်နှင့် မန္တလေးမြို့တို့၌ ဝန်ထမ်းများအား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဦးမောင်ဦး တွေ့ဆုံ ... ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းသင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ ... သံလွင်ကြိုးတံတား (တာကော်အက်) ကြံ့ခိုင်မှု ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ... မြိတ်ကျွန်းစုဒေသကြီး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ ...ယဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာများ အသိပညာပေးဟောပြော ... ဆန်စပါးထုတ်လုပ်မှု အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရေး ကြို့ပင်ကောက်၌ ဆွေးနွေး ...အမှတ်(၆၆) ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ် တပ်မမှူးတံခွန် စိုက်ဒိုင်း မိုးရာသီဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲနှင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ...တောင်ပိုင်းဒေသများ မိုးပိုလာနိုင်
Description/subject: ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ သ၀ဏ္လႊာေပးပို ့... ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကင္းေ၀းေရး စုေပါင္းကာကြယ္... ေတာင္ငူၿမိဳ႔စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္မႈ တုိင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္လွမင္း ၾကည္႕႐ႈစစ္ေဆး... အမ်ဳိးသားအဆင္႕ အားကစားစီမံခန့္ခြဲသူမ်ား သင္တန္းဖြင္႕ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ... တိုင္းမွဴးဒိုင္း စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဦး တက္ေရာက္ဆုခ်ီးျမႇင္႕... ျမင္းၿခံႏွင္႕ ေတာင္သာၿမိဳ႔တုိ့ရွိ ဘ႑ာ/အခြန္လုပ္ငန္းမ်ား ၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္း ၾကည္႕႐ႈစစ္ေဆး... ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းအား အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆံု... ေက်ာက္ဆည္၊ ပလိပ္ႏွင့္ ရမည္းသင္းၿမိဳတို ့ရွိ စက္႐ံုမ်ား စက္မႈ(၁) ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း ၾကည္႕႐ႈစစ္ေဆး... ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ႕ကရိတ္ၿမိဳ႔ နယ္ ထီးဟူးသံေက်းရြာ၌ နယ္ျခားေစာင္႕တပ္ ဖြင္႕ပြဲက်င္းပ... မွတ္ပံုတင္ခြင္႕ရရွိၿပီးေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို့ယင္းတို ့၏ ပါတီ၀င္အင္အားစာရင္းမ်ား လာေရာက္တင္ျပ...
Description/subject: ပညာကိုလေ့လာဆည်းပူး မှတ်သားခြင်းမှသည် အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဆီသို့... စားပွဲတင်တင်းနစ်(အမျိုးသား)ပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲကျင်းပတိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ တံခွန်စိုက်ဖလား ချီးမြှင့်... စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်မိုင်းကိုင်၌ အလှူငွေပေးအပ်... တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်မြင့်စိုးနှင့် ဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းရွေပြည်စိုးဧည့်ရိပ်မွန် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် အိမ်ရာများလွဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားတက်ရောက်... မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း အဏုဇီဝဗေဒအဖွဲ့၏ တီဘီရောဂါဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်... ခရိုင်အလိုက် ပိုက်ကျော်ခြင်းပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲ တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်စိုး တက်ရောက်အားပေး...တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်မြင့်စိုးနှင့် ဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်း ရွှေပြည်စိုးဧည့်ရိပ်မွန် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် အိမ်ရာများလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားတက်ရောက်...